LokaChantha: December 2009
ဆရာစော။ ။ ကဲ … ဆရာဇေ တက်နေတဲ့ အဘိဓမ္မာသင်တန်းမှာ စိတ်ပိုင်းပို့ချချက် ပြီးသွားပြီလို့ ကြားတယ်။
ဆရာဇေ။ ။ ဟုတ်တယ်ဗျ … အမှန်ဆို ဒီဇင်ဘာ ၁၉ ကတည်းက ပြီးရမှာ။ အဲဒီနေ့က နှင်းမုန်တိုင်းကျပြီး ရာသီဥတု မကောင်းတာကြောင့် သင်တန်းနဲ့ စနေနေ့တရားပွဲ ပျက်သွားတယ်။ ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်နေ့မှပဲ စိတ်ပိုင်းပို့ချချက် အဆုံးသတ်တာပေါ့။
ကဖိုးထိန်။ ။ ဆရာဇေ မှတ်လာ သင်လာတာလေးတွေ ကြားချင်ပါသေးတယ်။ ‘စာ’နာပွဲပေါ့ ဆရာဇေ။
ဆားပုလင်းခင်မောင်ဝင်း။ ။ နာပါရစေမယ် ကဖိုးထိန်။ ဆရာဇေတင်မကဘူး … ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော်ပါ စာဖတ်သူအနေနဲ့ ဖတ်ပြဖို့ စာတစ်အုပ် ယူလာပါသေးတယ်။
ကဖိုးထိန်။ ။ ဘာစာအုပ်များလဲ?
ဆားပုလင်း။ ။ အားလုံး ဖတ်ပြီးသား ဖြစ်မယ့် စာအုပ်ပါ။ တောင်မြို့ဆရာတော် အရှင်ဇနကာဘိဝံသရဲ့ ‘ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ’လေ ဗျာ။
ဆရာဇေ။ ။ အတိုင်းထက် အလွန် ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့ဗျာ။ ၂၆ ရက်နေ့ သင်တန်းမှာတော့ လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ် ၄၀ ကို ထပ်ပြီး ရှင်းပြတယ်။ စိတ် အကျဉ်း ၈၉ ပါး, အကျယ် ၁၂၁ ပါးကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်ရှင်းတယ်။ ဆိုရိုးလေးတွေ ဆိုတယ်။ သရုပ်ခွဲတယ်။ ဒီတော့ ဆားပုလင်း ဖတ်ကြားမယ့် ‘စာ’နာပွဲကိုပဲ စလိုက်ကြရအောင်။
ဆရာစော။ ။ ကောင်းတာပေါ့ ဗျာ။ ဒီကျမ်းစာကို ကိုယ်နေ့စဉ် ကြည့်ရှုတဲ့ ‘မှန်’လို သဘောထားပြီး ကိုယ်အဖြစ်တွေနဲ့ ဆင်ခြင်ကြည့်ဖို့ ဖတ်ရှုကြဖို့ ဆရာတော်တိုက်တွန်းထားတာ မှတ်မိတယ်။
ဆားပုလင်း။ ။ “ထောက်မှန်ပေါ်တွင်၊ ကိုယ့်အသွင်ကို၊ ဆင်ပြင်လိုမှု၊ နေ့စဉ်ရှုသို့၊ ယခုဤကျမ်း၊ မှန်လိုမှန်း၍၊ ရှုစမ်းစေချင်၊ ကိုယ့်ဖြစ်အင်ကို၊ ဆင်ခြင်လေကွဲ့ နေ့စဉ်တဲ့” …. ဒါ ဆရာစော မှတ်မိနေတဲ့ လင်္ကာလေး။ အချီနိဒါန်းမှာ ပါတယ်။
ဒီအချီနိဒါန်းလေးထဲက နည်းနည်း ကောက်နုတ် ဖတ်ပြမယ်။ ဒီကျမ်းစာအုပ်ကို ဘာကြောင့်ရေးရတယ်ဆိုတာ ဆရာတော်က ပြောပြထားတာ မဟုတ်လား။
ယခုခေတ်၏ အဖြစ်အပျက်ကို လေးနက်စွာ စဉ်းစားသောအခါ များစွာသော လူသတ္တဝါတို့၌ မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ ဟူသော ဗြဟ္မစိုရ်တရားများ ကွယ်ပျောက်၍ သွေ့ခြောက်နေသကဲ့သို့ ထင်ရလေသည်။
ထိုသူတို့၏ ခြောက်သွေ့သွေ့ အပူဓာတ်သည် သူတော်ကောင်းတို့၌ပင် အရှိန်ဟပ်သဖြင့် သွေ့ခြောက်လုမတတ် ရှိရလေပြီ … တဲ့။
ကဖိုးထိန်။ ။ ဘာလဲဗျ … အပူဓာတ်ဆိုတာ။
ဆားပုလင်း။ ။ စာထဲက စာပိုဒ်ရဲ့ ခေါင်းစဉ်ငယ်ကို ဖတ်လိုက်တာပါဗျ ကဖိုးထိန်။ အပူဓာတ်ဆိုတာကို ဆရာတော်က ရှင်းပြထားပါတယ်။ ကဲ … နားထောင်။
ထိုအပူဓာတ်ဟူသည်လည်း တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မညှာတာနိုင်လောက်အောင် ဖြစ်နေသော လောဘ၊ ဒေါသ၊ မာန်မာနနှင့် ဣဿာ၊ မစ္ဆရိယ စသည်တို့ပင်တည်း။
ဣဿာဆိုတာ ဘာလဲ၊ မစ္ဆရိယဆိုတာ ဘာလဲ ထပ်မမေးနဲ့အုန်းနော် ကဖိုးထိန်။ သိချင်ရင်တော့ ဆရာဇေတို့နဲ့ အဘိဓမ္မာသင်တန်း လိုက်တက်ချေတော့။
ကဖိုးထိန်။ ။ ဟုတ်ပါပြီ ဗျာ … ဆက်သာဖတ်ပါ။
ဆားပုလင်း။ ။ ထိုအပူဓာတ်သည် ယခုဘဝတွင်သာ ခြောက်ကပ်စေသည် မဟုတ်။ သံသရာတလျှောက် နောက်နောင်ဘဝ၌လည်း ခြောက်ကပ်စေလိမ့်မည်သာ။
ထို့ကြောင့် ထိုအပူဓာတ်တွေကို ယခုဘဝက စွမ်းနိုင်သမျှ ငြိမ်းသတ်လျက် မြင့်မြတ်သော စိတ်ထားဖြင့် မေတ္တာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ ဟူသော ဗြဟ္မစိုရ်အအေးဓာတ် မပြတ် စိမ့်စိုအောင် ကြိုးစားသင့်ကြပေသည်။
ကဲ … လာပြန်ပြီ။ သံသရာဆိုတာ ဘာလဲ? တဲ့။
“သံသရာတလျှောက်”ဟူသော စကားအရ “သံသရာဆိုတာ ဘာလဲ”ဟု စဉ်းစားဖွယ် ရှိ၏။
သတ္တဝါတို့တည်နေရာ ဤကမ္ဘာလောကကြီးကို “သံသရာ”ဟု ခေါ်မည် မဟုတ်။
စိတ် စေတသိက် ရုပ်တရားတို့ တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်နေမှုကိုသာ “သံသရာ”ဟု ခေါ်သည်။
သံ = ဆက်စပ်လျက်
သရ = ဖြစ်ခြင်း
ဆရာစော။ ။ “သံသရာ”ကို မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ တရားတော်တစ်ပုဒ်ထဲမှာ ရှင်းပြထားတာ ဖတ်ဖူးသလိုလိုပဲဗျ။
ဆရာဇေ။ ။ ဘယ်တရားတော်ထဲမှာလဲ ဆရာစော။
ဆရာစော။ ။ သေချာတော့ မမှတ်မိဘူးဗျ။ ရှာတွေ့ရင် ပြောပြပါ့မယ်။
ကဖိုးထိန်။ ။ ကဲ သံသရာဆိုတာ ဘာလဲ အမေးခေါင်းစဉ်လေး ပြပြီးတော့ ရှင်းပြပြီးတော့ နောက်ထပ် ဘာအမေးခေါင်းစဉ်လေး ပြသလဲဗျ။
ဆားပုလင်း။ ။ လူ နတ် ဗြဟ္မာဆိုတာ ဘာလဲ? တဲ့။
‘လူ’ ‘နတ်’ ‘ဗြဟ္မာ’ ‘ပုဂ္ဂိုလ်’ ‘သတ္တဝါ’ ‘ငါ’ ‘သူ’ ‘ယောက်ျား’ ‘မိန်းမ’ ဆိုတာ ရုပ်တရားနှင့် နာမ်တရားတို့ ပေါင်းစပ်၍ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ပျက်နေသော အစဉ်အတန်း တဲ့။
အဲဒီလို ရုပ်နာမ်တရားအစုတို့၏ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ပျက်နေခြင်းသည် အကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် တဲ့။
၁။ မိမိတို့၏ အပြင်ဘက်မှာ အမြဲတွေ့ကြုံနေရသော အာရုံများ
၂။ မိမိတို့ သန္တာန်ဝယ် ရှေးရှေးက ဖြစ်နှင့်သော ကံများ
ဒီအကြောင်း နှစ်ခုကြောင့်လို့ ဆိုတယ်။
နံပါတ်တစ်ဖြစ်တဲ့ ကောင်းကောင်း ဆိုးဆိုး အပြင်အာရုံ တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ တွေ့ရာဝယ် မိမိတို့၏ အတွင်းစိတ်ဓာတ် ကောင်းမွန်ဖို့သာ အရေးကြီးပေသည်။
အတွင်းစိတ်ဓာတ် ကောင်းမွန်ဖို့ ဆိုတာလည်း တွေ့ရာကြုံရာ ကိစ္စ၌ ‘သင့်တော်အောင် နှလုံးသွင်းမှု’ (ယောနိသော မနသိကာရ) ရှိမှ စိတ်ကောင်း နှလုံးကောင်း ရရှိနိုင်ကြသည် တဲ့။
ယောနိသော မနသိကာရ ဆိုတဲ့ သင့်တော်အောင် နှလုံးသွင်းမှု ရှိဖို့ဆိုတာကလည်း -
- စာကောင်းပေကောင်း ကြည့်ရှုခြင်း
- ပညာရှိ သူတော်ကောင်းထံ နည်းခံလေ့ရှိခြင်း (ပညာရှိ သူတော်ကောင်းနှင့် ပေါင်းလေ့ရှိခြင်း)
- “ငါ့သန္တာန်၌ အမြဲ စိတ်ကောင်း ဖြစ်စေမည်”ဟု ခိုင်မြဲသော စိတ် ထားရှိခြင်း ရှိဖို့ လိုပြန်သတဲ့။
ဒီအခြေခံအကြောင်းတွေပေါ် မူတည်ပြီး ဆရာတော်က အချက်သုံးချက်နဲ့ “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ”ကျမ်းစာအုပ်ကို ပြုစု ရေးသားပါသတဲ့။
၁။ တွေ့ရာကြုံရာ ကိစ္စ၌ ယောနိသော ရှိသဖြင့် သင့်လျော်အောင် နှလုံးသွင်းကာ အရာရာ၌ ဗြဟ္မစိုရ်တရား လက်ကိုင်ထားလျက် ကြီးမားသော စိတ်သဘောရှိသူ အပေါင်းအသင်းဆံ့သူ ဖြစ်စေလိုခြင်း။
၂။ ချမ်းသာရွှင်မြူး ရာထူးဂုဏ်သိန် စည်းစိမ်တိုးတက်နေသည်ဖြစ်စေ၊ တစ်စုံတစ်ခု ပျက်စီးမှုကြောင့် ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေရသည်ဖြစ်စေ၊ စိတ်နေမပြောင်း စိတ်ကောင်းမပျက် စိတ်စက်ကြည်ကြည် တည်တည်တံ့တံ့ ခံ့ခံ့ကြီး နေထိုင်စေလိုခြင်း။
၃။ နောက်ဘဝမှ စ၍ နိဗ္ဗာန်ရသည့် ဘဝတိုင်အောင် ပြောင်ပြောင်လက်လက်နှင့် အဆက်ဆက် တန်းမြင့်ဖို့ရာ ယခုဘဝ၌ပင် ဒါန သီလ စသော လက်လှမ်းမီရာ ပါရမီကောင်းမှု ကုသိုလ်စုကို ကြိုးစားနေသူ ဖြစ်စေလိုခြင်း - ဤ ၃ ချက်ကို အရင်းထား၍ များစွာသော လူအပေါင်းတို့ ကိုယ်ကျင့်ကောင်းဖို့ရာ “ကိုယ်ကျင့်အဘိဓမ္မာ”ဟူသော နာမည်ဖြင့် ကျမ်းသစ်တစ်စောင် တည်ထောင် ဖန်တီးရပေသတည်း။
ပြီးတော့ စောစောက ဆရာစော မှတ်မိတဲ့ “ထောက်မှန်ပေါ်တွင်၊ ကိုယ့်အသွင်ကို၊ ဆင်ပြင်လိုမှု၊ နေ့စဉ်ရှုသို့၊ ယခုဤကျမ်း၊ မှန်လိုမှန်း၍၊ ရှုစမ်းစေချင်၊ ကိုယ့်ဖြစ်အင်ကို၊ ဆင်ခြင်လေကွဲ့ နေ့စဉ်တဲ့” ဆိုတဲ့ လင်္ကာလေးနဲ့ အချီနိဒါန်းကို အဆုံးသတ်သပေါ့ဗျာ။
ကဲ … ပရမတ်အကြောင်းနဲ့ စိတ်အကြောင်း ပါဝင်တဲ့ ပထမအခန်းလေးကို ဖတ်ပြမယ်။
ဖြည်းဖြည်းလေး ဖတ်ပြသွားမယ်။ ကဖိုးထိန်က မေးစရာတွေ ရှိလာရင် မှတ်သားထားပေါ့။ အားလုံး ပြီးသွားမှ မေးတာပေါ့။ ခုတော့ ဆရာစောရဲ့လက်ရာ ဝက်ခေါင်းသုတ်လေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေး စားသောက်ရင်း နာလည်းနာ … စားလည်းစားပေါ့။
ပရမတ္ထတရား ၄ ပါး
မြန်မာလို “မြတ်သော အနက်သဘော”ဟု ဆိုလိုသည်။ “မြတ်”ဆိုသည်မှာလည်း ‘မွန်မြတ်’ ‘မြင့်မြတ်’ ‘ကောင်းမြတ်’ ဆိုသော အမြတ် မဟုတ်။
ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်း မဖောက်ပြန် မပြောင်းလဲဘဲ ခိုင်မြဲတည့်မတ်သော အမြတ်တည်း။
ထိုပရမတ္ထတရားကား - စိတ်, စေတသိက်, ရုပ်, နိဗ္ဗာန် အားဖြင့် ၄ ပါး ရှိသည်။
စေတသိက်တရားတို့၌ လောဘ ဒေါသများ ပါရှိ၏။
လောဘသည် လိုချင်ခြင်းသဘော၊ ဒေါသကား ခက်ထန်ခြင်းသဘောပင်တည်း။
လောဘသည် ပညာရှိသူတော်ကောင်း၏ သန္တာန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ သူယုတ်မာသန္တာန်မှာဖြစ်ဖြစ်၊ ခွေးသန္တာန်မှာဖြစ်ဖြစ် လိုချင်သော သဘောမှ ဖောက်ပြန်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း မရှိချေ။
ထို့အတူ ဒေါသ၏ ခက်ထန်ခြင်းသဘောလည်း မည်သူ့သန္တာန်မှာဖြစ်ဖြစ် မဖောက်ပြန် မပြောင်းလဲချေ။
အခြားသော ပရမတ္ထတရားတို့ မပြောင်းလဲကြပုံကိုလည်း ဤနည်းအတိုင်း သိပါ။
၁။ သဘောအမှန်၊ မဖောက်ပြန်သဖြင့်၊ မှန်ကန်တည့်မတ်၊ ဂုဏ်အမြတ်၊ ပရမတ္ထခေါ်။
၂။ စိတ်စေတသိက်၊ ရုပ်နိဗ္ဗာန်အား၊ ခွဲ၍ထား၊ လေးပါးပြားဘိသော်။
အာရုံကို သိတတ်သော သဘောသည် စိတ်
ငါတို့သည် ဟိုဟာသိ သည်ဟာသိနှင့် အချိန်ရှိသမျှ အာရုံတွေကို သိနေကြသည်။
ထိုသို့ အာရုံတွေကို သိတတ်သော သဘောကို “စိတ်”ဟု ခေါ်သည်။
“သိ”ဆိုသော်လည်း ဉာဏ်ဖြင့် သိသော အသိမဟုတ်။ အာရုံကို ရအောင် ယူနိုင်ခြင်းပင် “အသိ”ဟု ခေါ်သည်။
အာရုံ ၆ ပါး၊ အသိ ၆ မျိုး
၁။ အဆင်း အရောင်ဟူသမျှ = ရူပါရုံ
၂။ အသံဟူသမျှ = သဒ္ဒါရုံ
၃။ အနံ့ဟူသမျှ = ဂန္ဓာရုံ
၄။ အရသာဟူသမျှ = ရသာရုံ
၅။ အတွေ့ဟူသမျှ = ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ
၆။ ကြွင်းသော သိဖွယ်ဟူသမျှ = ဓမ္မာရုံ
ရူပါရုံကို မြင်သောအခါ မြင်သိ သိသောစိတ် ဖြစ်၏။
သဒ္ဒါရုံကို ကြားသောအခါ ကြားသိ သိသောစိတ်၊
ဂန္ဓာရုံကို နံသော မွှေးသောအခါ နံသိ မွှေးသိ သိသောစိတ်၊
ရသာရုံကို အရသာခံသောအခါ အရသာသိ သိသောစိတ်၊
တစ်စုံတစ်ခုကို တွေ့ထိရသောအခါ အတွေ့အထိသိ သိသောစိတ်၊
ထိုအာရုံငါးပါးနှင့်တကွ ကြွင်းသော အကြောင်းအရာတွေကို သိသောအခါ ဆိုရာကို သိသောစိတ်များ ဖြစ်ကြလေသည်။
ဤသို့ ဆိုင်ရာအာရုံကို ရအောင် ယူနိုင်ခြင်းသည် စိတ်၏ သိခြင်းပင်တည်း။
စိတ်သည် အဝေးသို့လည်း သွားနိုင်၏။
တစ်ပါးတည်းသာ လှည့်လည်လေ့ ရှိ၏။
ခန္ဓာကိုယ် အထည်ဒြပ်လည်း မရှိ။
ခန္ဓာကိုယ်ဝယ် ဟဒယလိုဏ်ဂူ၌ အများအားဖြင့် ဖြစ်လေ့ရှိ၏ ဟု ဓမ္မပဒပါဠိတော်၌ ဟောတော်မူသည်။
စိတ်သည် ခြေဖြင့် လျှောက်သွားနိုင်သကဲ့သို့ အဝေးရပ် ရောက်အောင် သွားနိုင်သည် မဟုတ်။
သို့သော် အလွန်ဝေးသော အရပ်ကို လှမ်း၍ အာရုံပြုနိုင်ရကား အဝေးရောက်အောင် သွားသကဲ့သို့ ထင်ရပေသည်။
ဥပမာ - မန္တလေးမှ နေ၍ ရန်ကုန်ရှိ အာရုံများကို အာရုံပြုရာ၌ စိတ်သည် ရန်ကုန်သို့ ရောက်သွားသည် မဟုတ်။ မန္တလေးမှာ ဖြစ်လျက်ပင် ရန်ကုန်သို့ လှမ်း၍ အာရုံပြုနိုင်သည်။
ထိုသို့ အဝေးအာရုံကို ယူနိုင်သည့်အတွက် “အဝေးလည်းသွား”ဟု ဆိုရပေသည်။
စိတ်သည် အလွန် အဖြစ်အပျက် မြန်၏။
လက်ဖျစ်တစ်ချက်တီးခန့် အချိန်မှာပင် စိတ်ပေါင်း ကုဋေတစ်သိန်းမက ရှေ့နောက် ဆက်၍ ဖြစ်ပျက်နိုင်၏။
ထိုမျှလောက် အဖြစ်အပျက် မြန်သည့်အတွက် စိတ် ၂-မျိုး ၃-မျိုး တစ်ပြိုင်နက် ဖြစ်၍ အာရုံ ၂-ခု ၃-ခုကို တစ်ခါတည်း ယူနိုင်သည်ဟု ထင်ရလေသည်။
စင်စစ်မှာ ၂-စိတ် ၃-စိတ် ပြိုင်၍ ဖြစ်ရိုး မရှိ။
တစ်စိတ်ပြီးမှ တစ်စိတ် ဖြစ်၍ အာရုံတစ်ခုကို ယူပြီးမှ တခြား အာရုံတစ်ခုကို ဆက်၍ ယူရသည်။
မွှေးကြိုင်စွာ ပန်းနံ့သာ ခြယ်လှယ်ထားသော ဖဲမွေ့ရာပေါ်မှာ ထိုင်လျက် ချိုချဉ်စားရင်း က၍ သီဆိုနေသူကို ကြည့်ရှု နားထောင်ရာ၌ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့၊ အရသာ၊ အတွေ့ အာရုံ ၅ မျိုးလုံးပင် အနီးအပါးတွင် ရှိ၏။
ထိုအခါ စိတ်သည် ထိုအာရုံ ၅ မျိုးလုံးကို တစ်ပြိုင်နက် မသိ။
မိမိအနှစ်သက်ဆုံး အာရုံတစ်ခုခုကို စိတ်တစ်မျိုးဖြင့် ရှေးဦးစွာ သိပြီးမှ အခြား အခြားသော အာရုံများကို တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်၍ ဆက်၍ သိသည်။
ဤသို့လျှင် စိတ်သည် ၂-ပါး၊ ၃-ပါး (အများအပြား) ပြိုင်၍ ဖြစ်ရိုး မရှိ။ တစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်ရိုးရှိသောကြောင့် “တစ်ပါးတည်း လည်”ဟု ဆိုရပေသည်။
“လည်” ဆိုသော်လည်း အဝေးသို့ လှည့်လည်သည် မဟုတ်။
အဝေးအာရုံကို ယူနိုင်သောကြောင့် “လည် = လှည့်လည်”ဟု ဆိုရပေသည်။
အာရုံတစ်ခုကို စိတ်က ယူရာ၌လည်း ထိုအာရုံကို စိတ်တစ်စိတ်တည်းက အပြီးအစီး သိအောင် မယူနိုင်။
အာရုံတစ်ခုကို သိထိုက်သမျှ သိအောင် စိတ်ပေါင်း အတော်များစွာ ဆက်ကာ ဆက်ကာ ဖြစ်ရသည်။
ထိုသို့ ဆက်၍ ဆက်၍ အတော်များစွာ ဖြစ်ရသော်လည်း လက်ဖျစ်တစ်ချက်တီး အချိန်မှာ ကုဋေသိန်းပေါင်းများစွာ ဖြစ်ပျက်နိုင်သောကြောင့် လူအပေါင်းတို့က မြင်,မြင်ချင်း၊ ကြား,ကြားချင်း၊ မွှေး,မွှေးချင်း၊ ထိ,ထိချင်း သိသည်ဟု မှတ်ထင်ကြသည်။
စိတ်မှာ အထည်ကိုယ်ဒြပ် အထင်အရှား မရှိ။
ထို့ကြောင့် စိတ်ကို ဖြူသည် မည်းသည် ပိန်သည် ဝသည်ဟု မဆိုနိုင်။
အာရုံကို သိနိုင်သော သဘော သတ္တိမျှသာ ထင်ရှားရှိသည်။
မြင်သိ သိသောစိတ်သည် မျက်လုံးအတွင်းမှာ ဖြစ်၏။
ကြားသိ သိသောစိတ်သည် နားအတွင်းမှာ ဖြစ်၏။
နံသိ သိသောစိတ်သည် နှာခေါင်းအတွင်းမှာ ဖြစ်၏။
အရသာသိ သိသောစိတ်သည် လျှာအတွင်းမှာ ဖြစ်၏။
အတွေ့သိ သိသောစိတ်သည် ခန္ဓာကိုယ်ဝယ် ထိမိရာ အရပ်တိုင်းမှာ ဖြစ်၏။
ဤသို့လျှင် အချို့ အချို့ စိတ်များ မျက်လုံး စသော အရပ်၌ ဖြစ်သော်လည်း များစွာသော စိတ်တို့ကား ရင်ချိုင့်အတွင်းရှိ ဟဒယနှလုံးအိမ်မှာ ဖြစ်ကြသည်။
ဤသို့ လိုဏ်ဂူနှင့်တူသော နှလုံးအိမ်မှာ အဖြစ်များသောကြောင့် စိတ်ကို “ဂူအောင်းသည်”ဟု ဆိုရပေသည်။
အချုပ်မှာ - စိတ်ဟူသည် ပုံသဏ္ဌာန် မရှိ။ အာရုံကို ရအောင် ယူခြင်း၊ အာရုံကို သိခြင်း သဘောသတ္တိသာတည်း။
ထိုကဲ့သို့ အာရုံယူရာ၌ မိမိဖြစ်ရင်းစွဲ ဟဒယလိုဏ်ဂူအတွင်းမှ တစ်ဆံခြည်မျှ အပြင်မထွက်ကြဘဲ အလွန်ဝေးသော အာရုံကို လှမ်း၍ ယူနိုင်ကြသည်။ ထိုသို့ ယူရာ၌ ၂-စိတ် ၃-စိတ် ပြိုင်တူ ပူးပေါင်း၍ မဖြစ်။ တစ်စိတ်ပြီး တစ်စိတ် စီကာ စဉ်ကာ ဖြစ်သည်ဟု မှတ်ပါ။
၁။ အာရုံတစ်ခုခု၊ ရအောင်ပြု၊ မှတ်ရှုစိတ်သိပုံ။
၂။ အဝေးလည်းသွား၊ တစ်ပါးတည်းလည်၊ ကိုယ်ထည်မရှိ၊ ဂူအောင်းဘိ၊ စိတ်၏ခြင်းရာစုံ။
စိတ်တို့သည် အလွန် အဖြစ်အပျက် မြန်သောကြောင့် ၅-မိနစ်လောက်အတွင်းမှာပင် စိတ်ကောင်းစိတ်ဆိုး (ကုသိုလ် အကုသိုလ် စိတ်) ရောနှောလျက် ဖြစ်တတ်သည်။
နံနက်စောစော အိမ်ပေါ်မှ ဘုရားရှိခိုးလျက် ကုသိုလ်စိတ် ဖြစ်နေစဉ် အိမ်အောက်ထပ်မှ ရောင်းဝယ်မှုကိစ္စဖြင့် ခေါ်သံကြား၍ လောဘစိတ် ဖြစ်ရ၏။
ဘုရားအာရုံပြုနေစဉ် မခံချင်စဖွယ် ပြောလာသဖြင့် ဒေါသစိတ် ဖြစ်ရ၏။
ရောင်းမှု ဝယ်မှု လောဘကိစ္စ ပြုတုန်းမှာပင် လှူချင်တန်းချင်သည့်အခါ (လှူမည်တန်းမည်ဟု ကြံမိသည့်အခါ) သဒ္ဓါစိတ် “ကုသိုလ်စိတ်” ဖြစ်၏။
တစ်စုံတစ်ခု အလိုမကျ ဒေါသဖြစ်နေတုန်းမှာ ဆရာသမားတို့၏ အဆုံးအမကို သတိရ၍ သတိစိတ် “ကုသိုလ်စိတ်” ဖြစ်ပြန်၏။
တဏှာပေမ လောဘစိတ်ဖြင့် သမီးခင်ပွန်း စကားပြောနေစဉ် စကားပြောမတည့်၍ ဒေါသစိတ်ဖြစ်လေရာ တစ်ယောက်ယောက်က ကျေနပ်အောင် ချော့သဖြင့် စိတ်ပျော့၍ လာသောအခါ လောဘစိတ် ဖြစ်ပြန်၏။
ဤသို့ စသည်ဖြင့် စိတ်တို့၏ ပြောင်းလဲပုံ လျင်မြန်သောကြောင့် စိတ်ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း မိမိစိတ်ကို “စိတ်ကောင်းလား၊ စိတ်ဆိုးလား” ဟု ခွဲခြား၍ သိအောင် သတိထားပြီးလျှင် မိမိစိတ်ကို စိတ်ကောင်းများများဖြစ်အောင် ပြုပြင်ကြပါကုန်။
လူတို့မှာ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ရုပ်ချင်း မတူကြသကဲ့သို့ ထို့အတူ စိတ်ချင်းလည်း မတူကြချေ။
ထုံထိုင်းသော ရုပ်၊ သွက်လက်သော ရုပ် ကွဲပြားသကဲ့သို့ ထုံထိုင်းရိုးအသော စိတ်၊ သွက်သွက်လက်လက် ထက်မြက်သောစိတ် ဟုလည်း ကွဲပြားလျက် ရှိ၏။
ထိုကဲ့သို့ ကွဲပြားရာ၌ အလှဘက် အသွက်ဘက်မှာ အဆင့်ဆင့် သာ၍ ပြိုင်ဘက်ကင်းလောက်အောင် လှသူ၊ သွက်သူများလည်း ရှိ၏။
အဆိုးဘက် အထိုင်းဘက်မှာလည်း အဆက်ဆက် အောက်ကျလျက် တစ္ဆေပြိတ္တာတမျှ ဆိုးဝါးသူများလည်း ရှိကြလေသည်။
ထို့အတူ စိတ်ချင်း ကွဲပြားရာ၌လည်း စိတ်ကောင်း စိတ်ထက်ဘက်၌ အဆက်ဆက် တန်းတက်ကာ ပြိုင်ဘက်ကင်းလောက်အောင် စိတ်ကောင်းသူ၊ ထက်မြက်သူများ ရှိကြ၍ စိတ်ယုတ်မာဘက်၊ စိတ်ထိုင်းဘက်၌လည်း ဆက်ဆက်ဆိုးကာ ကြောက်မက် စက်ဆုပ်ဖွယ် ကောင်းအောင် ယုတ်မာသူ၊ သုံးမဖြစ်အောင် ထိုင်းမှိုင်းသူများလည်း ရှိကြလေသည်။
တော၌ မွေး၍ တောသွေးပါသော တောသူတောသားသည် မြို့ကြီးပြကြီးသူတို့၏ ဝတ်ပုံ စားပုံ နေပုံကို အလုံးစုံ အတုယူ၍ ကိုယ်ကျန်းမာရေး စိတ်ချမ်းသာရေးကိုပါ လိုက်စားပြီး ပြုပြင်လိုက်က မကြာခင် ရုပ်တစ်မျိုး ပြောင်းကာ တစ်နှစ် နှစ်နှစ်လောက် ကြာလျှင် ရှေးက တွေ့နေကျ လူအများပင် အထင်မှားလောက်အောင် ရုပ်အဆင်း ပြောင်းလာနိုင်၏။
ဤသို့ အပြောင်းအလဲ နှေးသဖြင့် အပြင်ခက်သော ရုပ်အဆင်းသည်ပင် ပြင်တတ်သူ ပြင်ချင်၍ ပြင်ဆင်နေလိုက်က တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းနိုင်သေး၏။
အပြောင်းအလဲ အလွန်မြန်၍ အင်မတန် ပြုပြင်လွယ်သော စိတ်ကို တကယ်ပြင်လိုလျှင် အဘယ်မှာ ပြင်မရဘဲ ရှိမည်နည်း။
နေ့စဉ်နှင့်အမျှ မိမိစိတ်ဖြစ်ပုံကို သတိထား၍ မတော်မတရား စိတ်တို့ကို နှိမ်နင်းသွားပါလျှင် မကြာခင် စိတ်ကောင်းရှိသူ ဖြစ်ကာ နှစ်နှစ် သုံးနှစ်လောက် ကြာသောအခါ ကိုယ့်စိတ်ကိုပင် ကြည်ညိုချင်လာအောင် စိတ်ကောင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
စိတ်ကို ပြင်သင့်သော အကြောင်းများ
မိမိ၏ စိတ်နေစိတ်ထားကို ကောင်းအောင် ပြုပြင်ဖို့ရာ အကြောင်းများစွာ ရှိပေသည်။
မိမိစိတ်ထား မကောင်းသေးသော အချက်၊ ယုတ်မာနေသော အချက်များကို မိမိသာ အသိဆုံး ဖြစ်၏။
ထိုကဲ့သို့ စိတ်ယုတ်မာ ရှိနေသော သူသည် လောကီဂုဏ်အတွက် အထက်တန်း၌ ရောက်နေသော်လည်း စိတ်အနေအထားအားဖြင့် အောက်တန်းအစားပင် ဖြစ်သေး၏။
စိတ်နေစိတ်ထား အောက်တန်းစား ဖြစ်နေသော ဂုဏ်ကြီးရှင်သော်လည်း နောက်နောင်ဘဝတို့၌ အောက်ကျနောက်ကျ ဖြစ်ရတော့လတ္တံ့။
ထိုကဲ့သို့ တန်းလျှောရမည့် အရေးကို တွေးမိခြင်းကြောင့်လည်း စိတ်နေစိတ်ထား ကြီးမားမြင့်မြတ်အောင် ပြုပြင်ထိုက်ပေသည်။
စိတ်ဆိုးစိတ်ယုတ်ရှိသူသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း မကြည်ညိုနိုင်။ မိတ်ဆွေချင်း, ညီအစ်ကို မောင်နှမ သားချင်း, သမီးခင်ပွန်းချင်း, ဆရာဒကာချင်း, အပေါင်းအသင်း ရင်းနှီးသူချင်းကလည်း သူ၏ ယုတ်မာကြောင်းကို သိလျှင် ချစ်ခင်နိုင်၊ အားရနိုင်၊ ကြည်ညိုနိုင်ကြမည် မဟုတ်။
ဤသို့ ရင်းနှီးသူများ အထင်သေးမည်ကို စိုးသောကြောင့်လည်း မိမိစိတ်ထားကို ဖြူစင်ဖြောင့်မတ် မြင့်မြတ်အောင် ပြင်ဆင်ထိုက်ကြပေသည်။
ထို့ပြင် စိတ်ဆိုး စိတ်ယုတ်မာ ရှိနေသူသည် ဒါနပြုပြု၊ သီလဆောက်တည် ဆောက်တည်၊ ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်း စီးဖြန်း၊ မည်သည့်ကုသိုလ် လုပ်ငန်း၌မဆို ရိုးသား ဖြူစင်လိမ့်မည်ဟူ၍ မမှတ်ထင်ထိုက်။
ထိုစိတ်ရင်းမကောင်းသူ၏ ကုသိုလ်ကံများကား အကျိုးပေး စင်စင်ကြယ်ကြယ် မရှိတတ်ချေ။
ဤသို့ နောက်နောင်ဘဝ အရေးဝယ် ပြုသမျှ ကုသိုလ်၏ အကျိုးပေး မစင်ကြယ်မည်စိုးသောကြောင့်လည်း မိမိစိတ်ကို ဖြူစင် ကောင်းမြတ်အောင် ပြုပြင်ထိုက်ကြပေသည်။
ထို့ပြင် စိတ်ဆိုး စိတ်ယုတ်မာ ရှိနေသူသည် ယခု တစ်ဘဝတာ ယုတ်မာမည် မဟုတ်။ ဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်းသော စိတ်ယုတ်မာများက တစ်သန္တာန်လုံး (တစ်ကိုယ်လုံး) ထုံမွှမ်းနေရကား နောက်နောက် ဘဝပေါင်းများစွာသို့လည်း စိတ်ယုတ်မာ အဆက်ဆက် ဓာတ်သတ္တိ ကူးစက်နေသောကြောင့် ထိုသူကို ရင့်မာသော ပါရမီရှင်ဟု ဆိုဖို့ရန် ခဲယဉ်းလေသည်။
ထို့ကြောင့် မိမိကိုယ်ကို ပါရမီရှင်များစာရင်း မပါဝင်မည် စိုး၍လည်း ယုတ်မာ ဆိုးရွားသော စိတ်များကို အမြန်ဆုံး ပြင်ထိုက်ကြသည်။
ဤသို့လျှင် မိမိ၏ စိတ်နေစိတ်ထားကို မကောင်း,ကောင်းအောင် ပြုပြင်သင့်သော အကြောင်းအရာတွေ များစွာ ရှိပေသည်။
မိလိန္ဒမင်း စိတ်ကို ပြုပြင်ပုံ
မိလိန္ဒမင်းကြီးသည် အရှင်နာဂသိန်ထံ ပြဿနာများ အထိုက်အလျောက် မေးပြီးနောက် သာသနာတော်ဝယ် လွန်စွာ အရေးကြီးသော ပြဿနာတို့ကို မေးဖို့ရန် အကြံဖြစ်လာသောအခါ ထိုပြဿနာများကို မမေးသေးဘဲ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး မိမိစိတ်ကို သမာဓိရအောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်စည်းနေပုံမှာ သူတော်ကောင်းတို့ အတုယူစရာ ကောင်းလှပါသည်။
စောင့်စည်းပုံကား - နံနက်စောစော အိပ်ရာထပြီးလျှင် ကိုယ်လက်စင်ကြယ်အောင် ရေချိုး၍ ဝတ်ရိုးဝတ်စဉ် အဝတ်တန်ဆာများကို မဝတ်တော့ဘဲ ဖန်ရည်ဆိုးသော အဝတ်ဝါကို ဝတ်ဆင်ကာ ဦးခေါင်းလည်း ခေါင်းတုံးအသွင် မှတ်ထင်လောက်အောင် ခေါင်းစွပ်လျက် (ရဟန်းမဟုတ်သော်လည်း) ရဟန်းဟုပင် မှတ်ထင်ရလောက်အောင် ကြံဆောင် ဝတ်ဆင်ပြီးနောက် ၈-ပါးသော အချက်များကို ခုနစ်ရက်လုံးလုံး မပျက်ပြားအောင် စိတ်၌ စွဲမြဲစွာ ဆောက်တည်လေသည်။
ထို ၈ ပါးကား -
၁။ ခုနစ်ရက်အတွင်း မင်းကိစ္စကို မပြုတော့ပြီ။
၂။ ရာဂစိတ်ကို မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းမည်။
၃။ ဒေါသစိတ်ကို မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းမည်။
၄။ မောဟစိတ်ကို မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းမည်။
၅။ ကျေးတော် ကျွန်တော် အလုပ်သမား အမှုတော်ထမ်းများအပေါ်၌သော်လည်းကောင်း စိတ်ကို နှိမ့်ချ၍ မာန်မာန မဖြစ်အောင် စောင့်စည်းမည်။
၆။ ကိုယ်မှု နှုတ်မှုများ ထူးခြားစွာ စောင့်စည်းမည်။
၇။ မြင်ရ၊ ကြားရ၊ တွေ့ရ၊ သိရသမျှသော အာရုံများအတွက် အကုသိုလ် မဖြစ်အောင် မျက်စိ၊ နား စသော ဣနြေ္ဒများကို စောင့်စည်းမည်။
၈။ အားလုံးသော သတ္တဝါတို့အပေါ်မှာ မေတ္တာစိတ် ထားမည်။
ဤ ရှစ်ပါးသော အချက်ကို ခုနစ်ရက်လုံး စောင့်သုံးလျက် ရှစ်ရက်မြောက်နေ့၏ နံနက်အခါဝယ် နံနက်စာ စောစော စား၍ ဣနြေ္ဒကြီးမားလှသော ရဟန်းတော်ကဲ့သို့ စက္ခုနြေ္ဒချပြီးလျှင် စကားပြော ဆင်ခြင်ကာ အရှင်နာဂသိန်အထံသို့ ကြည်လင်ရွှင်ပျ အေးမြသော စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ချဉ်းကပ်လျက် လေးနက်စွာသော ပြဿနာများကို မေးလျှောက်လေသည်။
ဤ မိလိန္ဒမင်းကြီး၏ ခုနစ်ရက်လုံးလုံး စိတ်ပြုပြင်ပုံကို အတုယူလျက် သူတော်ကောင်းဘက်က အထက်တန်းရောက်သော အမျိုးသား အမျိုးသမီးများလည်း မိမိနေအိမ်မှာပင် တစ်နေ့တစ်ရက် တစ်နံနက် စသည်ဖြင့် ရက်ပိုင်းခြား၍ မိမိသန္တာန်၌ ဖြစ်လေ့ရှိသော အကုသိုလ်စိတ်များ မဖြစ်ရလေအောင် မကြာမကြာ အထူးစောင့်စည်းသင့်ပေသည်။
ဤသို့ စောင့်စည်းဖန်များလျှင် အကုသိုလ်စိတ် အထူး နည်းပါးသော သူတော်စင်အဖြစ်သို့ တက်ရောက်၍ သဒ္ဓါထူး ပညာထူး ပေါ်ပေါက်လာပါလိမ့်မည်။
ရက်ပေါင်း အတော်ကြာအောင် နဂိုဖြစ်တတ်သော အကုသိုလ်စိတ်များလည်း မဖြစ်ဘဲ ရှိပါလိမ့်မည်။
“ဤလောကကြီးကို စိတ်သည် ဆောင်ကြဉ်းအပ်၏။
ဤလောကကြီးကို စိတ်သည် ဆွဲငင်အပ်၏။
သတ္တဝါအားလုံးပင် စိတ်တည်းဟူသော တရားတစ်ခု၏ အလိုသို့ လိုက်နေရသည်။”
ဆားပုလင်း။ ။ ကဲ ... ပထမအခန်း ပြီးပါပြီ ဗျာ။
ဆရာစော/ဆရာဇေ/ကဖိုးထိန်။ ။ သာဓု ... သာဓု ... သာဓု။
Posted by LokaChantha at 3:29 PM No comments:
..... အရှင်မဟာပါလမထေရ်က မိမိကိုယ် မိမိ ပြန်မေးတယ်။ … အို မဟာပါလ … သံသရာမှာ မျက်စိကွယ်ပေါင်း များခဲ့ပြီ။ အမှန်ကို မမြင် မသိခဲ့သော အမှောင်ထုမှ လွတ်မြောက်ရန် ဖြစ်သည့် တစ်ခုတည်းသော လမ်းပေါ်၌ လျှောက်နေသော ငါ့အတွက် ရပ်နေရန်လည်း မသင့်။ နောက်ပြန်ဆုတ်ရန်ဆိုသည်ကိုတော့ ထည့်၍ပင် မစဉ်းစား … အဝေးကြီး ဝေးပေပြီ။ ငါ့အတွက် ခရီးရှေ့ဆက်ရန်သာ ရှိ၏။ သံသရာတွင်း နောက်ဆုံး မျက်စိကွယ်ခြင်းသာ ဖြစ်သင့်ပေစွတကား … ဒီလို မေးတယ်။
ဒီတော့ တရားနာ တကာ တကာမတွေအတွက်လည်း မိမိတို့မှာ အမြင် အကြား စသည် အာရုံများ ကောင်းခိုက်၊ တရားနာနိုင် တရားထိုင်နိုင် တရားရှုမှတ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်တွေ ပိုင်ဆိုင်နေခိုက်၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါတွေရဲ့ စွမ်းရည်သတ္တိတွေ အားကောင်းနေခိုက်မှာ တရားဘက်ကို အသုံးချစေချင်တယ်။
ဒကာကြီး ဦးဌေးလှိုင် ပြောခဲ့ဖူးတာလေး သူ့လင်္ကာလေးကို အမှတ်ရလို့ ရွတ်ပြချင်ပါတယ်။
“ကိုယ် .. လက် .. ခြေ များ
(အရှင်စက္ကိန္ဒ၏ “ဒေါသရှေ့ထား သူ့အမှား” တရားတော် မှ)
ဓမ္မပဒလာ အရှင်စက္ခုပါလမထေရ်၏ အကြောင်းကို ဆရာကြီး ဦးရွှေအောင်၏ “ဓမ္မပဒ” စာအုပ်မှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြလိုပါသည်။
သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ မြတ်စွာဘုရားသခင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ်က ဖြစ်ရပ် ဖြစ်၏။
သာဝတ္ထိပြည်၌ သူကြွယ် မဟာသုဝဏ္ဏသည် သားကြီး မဟာပါလနှင့် သားငယ် စူဠပါလတို့ကို လောကအလယ်၌ ထားရစ်ကာ ကွယ်လွန်ခဲ့၏။
မဟာပါလနှင့် စူဠပါလတို့သည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး များစွာ ကြင်နာကြသော ညီနောင်အရင်း ဖြစ်ကြပါလျက် မဟာပါလက အဆန်လမ်း လောကုတ္တရာကို မြင်၏။ စူဠပါလက အစုန်လမ်း လောကီကို မြင်၏။
တစ်နေ့တွင် မဟာပါလသည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ သွား၍ မြတ်စွာဘုရားသခင်ထံတော်မှ တရားတော်ကို နာယူ၏။
ထိုတရားပွဲကား မဟာပါလ၏အလို အဇ္ဈာသယကို လိုက်၍ ဟောသော တရားပွဲ ဖြစ်၏။ ထိုတရားပွဲ၌ ဒါနနှင့် စပ်၍လည်း ဟော၏။ သီလနှင့် စပ်၍လည်း ဟော၏။ နတ်ပြည်နှင့် စပ်၍လည်း ဟော၏။ လောက၏ အပြစ် ယုတ်ညံ့ခြင်း ညစ်နွမ်းခြင်းတို့နှင့် စပ်၍လည်း ဟော၏။ လောကုတ္တရာ၏ အကျိုးအာနိသင်နှင့် စပ်၍လည်း ဟော၏။
မဟာပါလသည် ဘဝမှ လွတ်မြောက်အောင် လုပ်ရန် ဉာဏ်ဖြင့် မြင်လေ၏။ အိမ်ပြန်ရောက်သော် ညီဖြစ်သူ စူဠပါလကို သူ၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကို ပေး၍ မြတ်စွာဘုရားသခင်၏ သာသနာတော်၌ ရဟန်းပြုမည့်အကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောလေသည်။
အစ်ကိုကြီး၏ စကားကို ကြားလျှင် စူဠပါလမှာ များစွာ တုန်လှုပ်လျက် ကျိုးကြောင်းပြ၍ ကန့်ကွက်စကား အတန်တန် ဆိုသော်ငြားလည်း ခိုင်မြဲသော မဟာပါလ၏ လောကအမြင်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မပြောင်းလဲနိုင်။
နောက်ဆုံး၌ မဟာပါလသည် မိမိ၏ညီငယ် စူဠပါလအား မိမိ၏ စည်းစိမ်ဥစ္စာ အားလုံးကို အမွေအဖြစ် ပေးစွန့်ပြီး မြတ်စွာဘုရားသခင် သီတင်းသုံးရာ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ သွား၍ ရဟန်းပြု၏။ စူဠပါလလည်း ငိုကြွေး မြည်တမ်းရင်း ကျန်ရစ်ခဲ့၏။
မဟာပါလသည် ဆရာ ဥပဇ္ဈာယ်ထံ၌ ငါးဝါပတ်လုံး နေ၍ ဝါကျွတ်သောအခါ ပဝါရဏာပြု၍ မြတ်စွာဘုရားသခင် အထံသို့ ချဉ်းကပ် ရှိခိုးလျက် ရဟန်းတို့၏ တာဝန်ကို လျှောက်ထား မေးမြန်း၏။
‘ပိဋကစာပေ သင်အံ ပို့ချခြင်း’နှင့် ‘ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ခြင်း’ ဟူ၍ တာဝန်နှစ်မျိုး ရှိကြောင်း မိန့်တော်မူရာ မဟာပါလသည် ကြီးရင့်သော ကာလ၌ ရဟန်းပြုခြင်းကြောင့် ပိဋကတ်စာပေ သင်အံ ပို့ချခြင်း တာဝန်ကို မထမ်းဆောင်နိုင်ဘဲ ဝိပဿနာတရား အားထုတ်ခြင်း တာဝန်ကိုသာ ထမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့် ဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို ဟောကြားတော်မူပါရန် မြတ်စွာဘုရားသခင်အား လျှောက်ထား၏။
မြတ်စွာဘုရားသခင်ကလည်း မဟာပါလအား အရဟတ္တဖိုလ်တိုင်အောင်သော ကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို မဟာပါလ၏ စရိုက်အားလျော်စွာ ဟောကြားတော်မူလိုက်၏။
မဟာပါလသည် သီတင်းသုံးဖော် ခြောက်ကျိပ်တို့နှင့်အတူ သာဝတ္ထိမှ ယူဇနာ ၁၂၀ ကွာဝေးသော ပစ္စန္တရစ်ရွာသို့ ကြွရောက်၍ ရဟန်းတရားကို အားထုတ်၏။ ရဟန်းတရားကို အားထုတ်ရာတွင် ဣရိယာပုတ် လေးမျိုးအနက် အိပ်ခြင်း ဣရိယာပုတ်ကို ပယ်၍ ထိုင်၊ ရပ်၊ သွား ဣရိယာပုတ် သုံးမျိုးဖြင့်သာ အားထုတ်၏။ မဟာပါလသည် ကြမ်းပြင်ပေါ်၌ မည်သည့်အခါမျှ ကျောကုန်းကို မဆန့်။ မည်သည့်အခါမျှ မအိပ်။
အိပ်စက်ခြင်း လုံးဝ မပြုသော အရှင်မဟာပါလအား ဝါဆိုလ လွန်၍ ဝါခေါင်လသို့ ရောက်လျှင် အိုးပေါက်မှ ယိုကျသော ရေအလျဉ်ကဲ့သို့ မျက်စိတို့မှ မျက်ရည်တို့သည် တသွင်သွင် ယိုစီးလျက် မျက်စိရောဂါ ဖြစ်ခဲ့၏။
အခြားသော သီတင်းသုံးဖော်တို့က အရှင်မဟာပါလ၏ မျက်စိရောဂါကို ကုရန် လိုကြောင်း၊ ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တော်နှင့်အညီ ဖိတ်ကြားထားသော မျက်စိကုဆရာ ရှိကြောင်း၊ ခွင့်ပြုလျှင် မျက်စိကုဆရာကို ခေါ်၍ ပြသလိုကြောင်း လျှောက်ထားကြ၏။
အရှင်မဟာပါလက သဘောတူ ခွင့်ပြုသောအခါ သီတင်းသုံးဖော်တို့သည် မျက်စိကုဆရာအား အကြောင်းကြားလျှင် မျက်စိကုဆရာသည် ဆီကို ချက်၍ ပို့၏။ မျက်စိထဲသို့ ဆီထည့်နည်းကိုလည်း လျှောက်ထားလိုက်၏။ ဆရာကိုယ်တိုင် လိုက်လာ၍ကား မကု။
ဆေးညွှန်းအရဆိုလျှင် ပက်လက်အိပ်ပြီး ဆီကို နှာဝမှ လောင်းထည့်ရမည်။ သို့ရာတွင် အရှင်မဟာပါလသည် တရားအားထုတ်ချိန်မှ စ၍ ပက်လက်ဖြစ်စေ စောင်းလျက်ဖြစ်စေ မည်သည့်အနေအထားနှင့်မျှ မအိပ်ရန် အဓိဋ္ဌာန်ပြုထား၏။
ထို့ကြောင့် မျက်စိရောဂါ ကုသရန်အတွက် ဆေးအညွှန်းနှင့် အဓိဋ္ဌာန်အကြား တစ်ဖက်ဖက်ကို လိုက်နာရန် မဟာပါလ ဆုံးဖြတ်ရချေတော့မည်။
အရှင်မဟာပါလသည် အဓိဋ္ဌာန် အပျက်မခံဘဲ ထိုင်လျက်ပင် ဆီကို နှာဝမှ လောင်းထည့်၏။ မျက်စိကုဆရာ၏ ညွှန်ကြားချက်ထက် အဓိဋ္ဌာန်မပျက်ဖို့က လောကုတ္တရာရေးရာတွင် ပို၍ အရေးကြီး၏။ မျက်စိကုဆရာ၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း မလိုက်နာလျှင် မျက်စိရောဂါ မပျောက်ရုံသာ ရှိမည်။ အဓိဋ္ဌာန်ပျက်လျှင် လောကုတ္တရာတရားနှင့် ပို၍ ဝေးမည်။ မဟာပါလ၏ ရည်ရွယ်ချက်က လောကုတ္တရာတရားထူး ရရေးသာ ပဓာန ဖြစ်၏။
မဟာပါလ ရွာတွင်းသို့ ဆွမ်းခံဝင်ရာ မျက်စိကုဆရာနှင့် တွေ့၏။
“အရှင်ဘုရား၏ မျက်စိရောဂါအတွက် တပည့်တော် ဆီပို့လိုက်ပါတယ်။ ဆီကို ခတ်ပါရဲ့လား ဘုရား”
“ဒါဖြင့် သက်ကော သက်သာပါရဲ့လား”
“ဆီကို ခတ်တဲ့အခါ ထိုင်ရင်း ခတ်ပါသလား။ အိပ်ပြီးမှ ခတ်ပါသလား”
ဤမေးခွန်းကိုမူ မဟာပါလ မဖြေတော့။
မျက်စိကုဆရာကလည်း ဇွဲမလျှော့။ အထပ်ထပ် မေး၏။
မဟာပါလကလည်း ဇွဲမလျှော့။ ငုတ်တုတ် ခံ၏။ မဖြေ။
နောက်ဆုံး၌ မျက်စိကုဆရာက လက်လျှော့လိုက်၏။ ‘ကြွပါတော့ အရှင်ဘုရား’ဟု လျှောက်ပြီး ကျောင်းသို့ ကိုယ်တိုင် သွားကြည့်၏။ မဟာပါလ၏ ကျောင်းသင်္ခမ်း၌ အိပ်ရာဟူ၍ မရှိ။ ထိုင်ရာနှင့် စင်္ကြံလျှောက်ရာသာ ရှိ၏။
အမှန်အားဖြင့် မျက်စိကုဆရာ၏ မျက်စဉ်းဆီသည် ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာပါက တစ်ကြိမ်ခတ်ရုံမျှဖြင့် မျက်စိရောဂါကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် မဟာပါလက မလိုက်နာ။ မဟာပါလသည် သူ၏ အဓိဋ္ဌာန်ကို မဖျက်။ ‘ထိုင်ရင်း ခတ်သလား၊ အိပ်ပြီး ခတ်သလား’ဟူသော မေးခွန်းကိုပင် မဖြေ။ ထိုမေးခွန်းသည် ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်နှင့် စပ်၏။ ရဟန်းတို့မည်သည် မိမိတို့၏ အကျင့်ပဋိပတ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထုတ်ဖော် မပြောကောင်း။
မျက်စိကုဆရာသည် မဟာပါလအား ကြည်ညိုပါ၏။ မျက်စိရောဂါကိုလည်း ပျောက်ကင်းစေလိုပါ၏။ ရဟန်းတရားကိုလည်း ကျင့်စေလိုပါ၏။ ထို့ကြောင့် မျက်စဉ်းဆီကို အိပ်ပြီး ခတ်ပါရန် အကြိမ်ကြိမ် လျှောက်ထား၏။ တောင်းလည်း တောင်းပန်၏။ သို့ရာတွင် မဟာပါလက မလိုက်နာ။ မြတ်သောသူတို့သည် မိမိတို့၏ ပါရမီမြောက် အဓိဋ္ဌာန်ကို ဖျက်ရိုး မရှိ။
လုပ်ငန်းတစ်ခု အောင်မြင်ရေးအတွက် အခြေခံအနေဖြင့် အင်္ဂါ ၄ ရပ် ရှိဖို့ လို၏။
ယင်း အင်္ဂါ ၄ ရပ်ကို ‘ဣဒ္ဓိပါဒ်’ဟု ခေါ်သည်။
ခိုင်မာသော ရည်မှန်းချက် ရှိရမည်။
မဆုတ်နစ်သော ကြိုးပမ်းမှု ရှိရမည်။
လုံလောက်သော ဉာဏ်ပညာ ရှိရမည်။
ဤအင်္ဂါ ၄ ရပ်ကို အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်ပါက လောကီဖြစ်စေ လောကုတ္တရာဖြစ်စေ တစ်နေ့တွင် မလွဲမသွေ အောင်မြင်ရ၏။
တစ်နေ့တွင် ဆိုရာ၌ ဣဒ္ဓိပါဒ် ကြားမပြတ်သော “တစ်နေ့တွင်” ဖြစ်၏။
ဣဒ္ဓိပါဒ် ကြားပြတ်သွားပါက “တစ်”ကပင် ပြန်စရ၏။
ထိုအခါ “တစ်နေ့တွင်”သည် မဆုံးနိုင်သော “တစ်နေ့တွင်” ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မဟာပါလသည် သူ၏ တရားအားထုတ်မှု လုပ်ငန်း၌ ဘဝမှာ လွတ်မြောက်ရေး ပန်းတိုင်အတွက် “တစ်”က ပြန် မစလို။
ရှေ့သို့သာ တိုး၍ တိုး၍ သွားလို၏။
ထို့ကြောင့် အဓိဋ္ဌာန်ကို ဖျက်၍ အိပ်ပြီး မျက်စဉ်းဆီကို မခတ်။ ထိုင်လျက်သာ ခတ်၏။ ထိုအခါ မျက်စိရောဂါက မသက်သာ၊ တိုး၍ တိုး၍သာ လာ၏။
မျက်စိကုဆရာကလည်း ဆရာနာမည်ပျက်မှာ စိုးရိမ်။ နောက်ဆုံး မတတ်သာတော့၍ မဟာပါလအား -
“အရှင်ဘုရား၊ တပည့်တော်၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုနိုင်ပါက မျက်စိရောဂါ ပျောက်ကင်းနိုင်ဖွယ် မရှိပါ။ ယနေ့မှ စ၍ တပည့်တော်ကလည်း မျက်စဉ်းဆီ ပေး၍ ကုသတော့မည် မဟုတ်ပါ။ အရှင်ဘုရားကလည်း တပည့်တော်၏ ကုသမှုကို ခံယူနေသည်ဟူ၍ မှတ်ယူတော် မမူပါလင့်” ဟူ၍ လျှောက်ထားပြီး အဆက်ဖြတ်လိုက်၏။
မဟာပါလသည် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း မရှိဘဲ ပို၍ပင် အားတင်းကာ ရဟန်းတရားကို အားထုတ်၏။ ထိုနေ့ ညဉ့်သန်းခေါင်ယံလွန်ချိန်၌ မျက်စိနှစ်ဖက်တို့သည်လည်း ကွယ်လေ၏။ အာသဝေါတရားတို့သည်လည်း ကုန်ခန်းလေ၏။
ထိုအခါ မဟာပါလသည် ဘဝမှ လွတ်မြောက်သော ရဟန္တာ ဖြစ်လေ၏။
ထိုအချိန်မှ စ၍ မဟာပါလအား “စက္ခုပါလမထေရ်” ဟူ၍ အမည်သစ် တွင်လေ၏။
စက္ခုပါလမထေရ် မျက်စိကွယ်သောအခါ ရွာတွင်းသို့ ဆွမ်းခံ မဝင်နိုင်တော့။ အခြား သီတင်းသုံးဖော် ခြောက်ကျိပ်တို့က ပြုသင့် ပြုထိုက်သော ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်တို့ကို ပြု၏။ ဆွမ်းခံ၍ လုပ်ကျွေးကြ၏။ ဒါယကာတို့ကလည်း စက္ခုပါလမထေရ်အတွက် ကျောင်းသို့ ဆွမ်းပို့ကြ၏။ ထိုခြောက်ကျိပ်သော ရဟန်းတို့သည် စက္ခုပါလမထေရ်၏ အနီးကပ် သြဝါဒကို ခံယူ၍ တရားအားထုတ်ကြရာ သီတင်းကျွတ်လပြည့် ပဝါရဏာနေ့ နီးသောအခါ အားလုံး ရဟန္တာ ဖြစ်ကြလေ၏။
ဝါကျွတ်သောအခါ ထိုရဟန္တာခြောက်ကျိပ်တို့သည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ရှိ မြတ်စွာဘုရားသခင်ကို ဖူးမြော်ရန် စက္ခုပါလမထေရ်အား လျှောက်ထားကြ၏။
စက္ခုပါလမထေရ်က “အရှင်ဘုရားတို့နှင့်အတူ တပည့်တော်သွားလျှင် အရှင်ဘုရားတို့လည်း မချမ်းသာ၊ တပည့်တော်လည်း မချမ်းသာ ဖြစ်မည်။ သို့ဖြစ်၍ အရှင်ဘုရားတို့ ဦးစွာ သွားနှင့်ကြ။ တပည့်တော်၏ စကားဖြင့် မြတ်စွာဘုရားသခင်နှင့် ရှစ်ကျိပ်သော မဟာသာဝကတို့ကို ရှိခိုးကြ။ ထို့နောက် တပည့်တော်၏ညီ စူဠပါလအား တပည့်တော် မျက်စိကွယ်ကြောင်း၊ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ လာရောက်နိုင်ရေးအတွက် ညီထံမှ တစ်စုံတစ်ယောက် စေလွှတ်ပေးရန် တောင့်တလျက်ရှိကြောင်း ပြောပြကြ” ဟူ၍ မိန့်ကြား၏။
ထိုရဟန္တာခြောက်ကျိပ်တို့သည် သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်သို့ ကြွရောက်၍ မြတ်စွာဘုရားသခင်နှင့် ရှစ်ကျိပ်သော မဟာသာဝကတို့အား စက္ခုပါလမထေရ်၏ စကားဖြင့် ရှိခိုး၍ တစ်ဖန် မိုးသောက်သောနေ့၌ စက္ခုပါလမထေရ်၏ညီ စူဠပါလသူကြွယ်နေရာ လမ်းခရီးသို့ ဆွမ်းခံဝင်ပြီး စက္ခုပါလမထေရ် မှာကြားသည့်အတိုင်း စူဠပါလသူကြွယ်အား ပြောကြားကြ၏။
စူဠပါလသူကြွယ်လည်း ရဟန္တာခြောက်ကျိပ်တို့၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း တူဖြစ်သူ ‘ပါလိတ’ကို လမ်းခရီး၌ ဘေးကင်း ရန်ကင်းစိမ့်သောငှာ သာမဏေပြုစေပြီး၊ အစ်ကို စက္ခုပါလမထေရ်ထံ ရောက်လျှင် အကျိုးအကြောင်း လျှောက်ထားကာ စက္ခုပါလမထေရ်၏ တောင်ဝှေးစွန်းကို ကိုင်၍ ယူဇနာ တစ်ရာ့နှစ်ဆယ် ဝေးရာ သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းတော်ဆီသို့ တူဝရီးနှစ်ယောက် လာကြ၏။
တူဝရီးနှစ်ယောက် လာကြရာ လမ်းခရီးအကြား ကဋ္ဌနဂရရွှာသို့ ရောက်၏။ ကဋ္ဌနဂရရွာမှ ထွက်၍ တော၌ သီချင်းဆိုလျက် ထင်းခွေနေသော အမျိုးသမီးငယ်၏ သီချင်းသံ၌ တပ်မက်ကာ ပါလိတသာမဏေသည် ဦးရီး စက္ခုပါလမထေရ်အား ခေတ္တ ရပ်တန့်တော်မူပါရန် လျှောက်ထားပြီး အမျိုးသမီးငယ်ထံ သွား၏။ သာမဏေနှင့် အမျိုးသမီးငယ်တို့ မှောက်မှားကြ၏။
ယခုပင် သီချင်းသံ ကြား၏။ ယခုပင် သီချင်းသံ ပျောက်၏။ သာမဏေသည်လည်း ကြာမြင့်၏။ သာမဏေနှင့် အမျိုးသမီးငယ်တို့သည် မှောက်မှားခြင်း ဖြစ်တန်ရာ၏။ သာမဏေသည်လည်း သီလပျက်စီးခြင်း ဖြစ်တန်ရာ၏ ဟူ၍ စက္ခုပါလမထေရ် ဆင်ခြင်မိ၏။
သာမဏေသည် မိမိကိစ္စပြီး၍ ဦးရီးထံ ပြန်လာကာ ရှေ့ခရီး ဆက်ရန် လျှောက်ထား၏။
ဦးရီးကလည်း သာမဏေအား ‘သာမဏေ၊ သင်သည် အမျိုးသမီးငယ်နှင့် မှောက်မှား၍ သီလပျက်ခဲ့ပြီ မဟုတ်လား’ ဟူ၍ မေး၏။ သာမဏေက မဖြေ။ ဦးရီးကလည်း ထပ်ကာ ထပ်ကာ မေး၏။ သာမဏေလည်း ဆိတ်ဆိတ် နေ၏။
စက္ခုပါလမထေရ်သည် တူသာမဏေအား မိမိ၏ တောင်ဝှေးစွန်းကို အကိုင်မခံဘဲ နှင်ထုတ်လေ၏။
သာမဏေကမူ မျက်စိနှစ်ဖက် ကွယ်နေသော ဦးရီးတော် မထေရ်သည် တောအုပ်အလယ်၌ ဒုက္ခရောက်မည်ကို စိုးရိမ်ပြီး အမျိုးမျိုး တောင်းပန် လျှောက်ထား၏။ သာမဏေဘဝနှင့် မကိုင်ရလျှင် လူဘဝနှင့် ကိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်၍ လျှောက်၏။
စက္ခုပါလမထေရ်က လုံးဝ ခွင့်မပြု။
ထိုအခါ သာမဏေသည် ကြီးစွာသော နောင်တဖြင့် ချစ်လှစွာသော ဦးရီးထံပါးမှ ငိုကြွေးမြည်တမ်းလျက် ဖဲခွာရလေ၏။
စက္ခုပါလမထေရ်သည် ကန္တာခရီးထဲ၌ အဖော်မဲ့ ဖြစ်၏။ မျက်စိလည်း မမြင်။ နောက်ဆုံး၌ သိကြားမင်းသည် ခရီးသည် ဟန်ဆောင်၍ စက္ခုပါလမထေရ်ကို သာဝတ္ထိပြည် ဇေတဝန်ကျောင်းအရောက် ဆောင်ယူသွား၏။ စူဠပါလသူကြွယ် ဆောက်လုပ် လှူဒါန်းထားသည့် ကျောင်း၌ နေရာချပေး၏။ နောက် စူဠပါလအား အစ်ကို စက္ခုပါလမထေရ် ရောက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းပို့၏။
ညီ စူဠပါလသည် အစ်ကို စက္ခုပါလအား အစွမ်းကုန် ပြုစု လုပ်ကျွေး၏။ မိမိ၏ ကျွန်နှစ်ယောက်ကိုလည်း ကျွန်ဘဝမှ လွတ်ငြိမ်းစေပြီး အစ်ကို မထေရ်ထံ၌ သာမဏေပြု၍ အနီးကပ် လုပ်ကျွေးစေ၏။
တစ်ခုသော မိုးကြီး သည်းထန်စွာ ရွာပြီး နောက်တစ်နေ့ မိုးသောက်ယံ၌ စက္ခုပါလမထေရ် စင်္ကြံသွားလျှင် မိုးရေစွတ်စိုစဖြစ်သော မြေမှ ထွက်လာသော ပိုးဖလံများစွာကို နင်းမိသဖြင့် ပိုးဖလံတို့ သေကြကုန်၏။
စင်္ကြံလမ်းသည် ပိုးဖလံသေတို့ဖြင့် ပြွမ်း၏။ စက္ခုပါလမထေရ်၏ သာမဏေတို့ တံမြက်မလှည်းမီ ဘုရားဖူးရဟန်းများသည် စက္ခုပါလမထေရ်၏ ကျောင်းသို့ ရောက်လာကြပြီး စင်္ကြံလမ်းရှိ ပိုးဖလံသေများကို တွေ့ကြ၏။
စင်္ကြံလမ်း၌ ပိုးဖလံများကို စက္ခုပါလမထေရ်က စင်္ကြံသွားခြင်းအားဖြင့် သတ်ပါကြောင်း ဘုရားဖူးရဟန်းများက မြတ်စွာဘုရားသခင်အား လျှောက်ထားကြ၏။
မြတ်စွာဘုရားသခင်က “ရဟန္တာတို့အား သေစေလိုသော စေတနာ မရှိ” ဟူ၍ ဟောတော်မူ၏။ ထိုအခါမှ စက္ခုပါလမထေရ်သည် ရဟန္တာဖြစ်ကြောင်း သိရှိကြပြီး ရဟန္တာဖြစ်ပါလျက် မျက်စိကွယ်ခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သဘောမပေါက်သော ပရိသတ်အား မြတ်စွာဘုရားသခင်က ဤသို့ ဟောကြားတော်မူ၏။
- ဓမ္မတို့သည် စိတ်လျှင် ရှေ့သွား ရှိကုန်၏။ စိတ်လျှင် အကြီးအမှူး ရှိကုန်၏။ စိတ်လျှင် အထည်ကိုယ် ရှိကုန်၏။
- မကောင်းသောစိတ်ဖြင့် ပြောဆို ပြုလုပ်မိပါက ထိုသို့ ပြောဆိုမိ ပြုလုပ်မိခြင်းကြောင့် လှည်းဘီးသည် နွား၏ ခြေရာသို့ အစဉ်တစိုက် လိုက်နေသကဲ့သို့ ဒုက္ခသည် ထိုပုဂ္ဂိုလ်သို့ အစဉ်တစိုက် လိုက်နေလေ၏။
စက္ခုပါလမထေရ်သည် တစ်ခုသော မျက်စိကုဆရာ ဘဝက မျက်စိရောဂါရှင်တစ်ဦးအား မှားသောအတွေးနှင့် မှားသောအမြင်တို့က ခင်းပေးသော လမ်းပေါ်၌ လျှောက်၍ မျက်စိကန်းအောင် ပြုလုပ်ခဲ့ဖူး၏။ ထိုအကုသိုလ်ကံကြောင့် မျက်စိကန်းရခြင်း ဖြစ်၏။
“မနော ပုဗ္ဗင်္ဂမာ ဓမ္မာ
မနော သေဋ္ဌာ မနောမယာ။
တတောနံ ဒုက္ခ မနွေတိ
စက္ကံ ဝ ဝဟတော ပဒံ။”
(ဓမ္မပဒဂါထာ - ၁)
အထက်ပါ မူလပါဠိတော်ကို ညောင်လေးပင် တောရဆရာတော်ဘုရားက ဤသို့ မြန်မာအနက် ပြန်ဆိုတော်မူသည်။
ဓမ္မာ = နာမက္ခန္ဓာ တရားသုံးပါးတို့သည်။
မနောပုဗ္ဗင်္ဂမာ = ဝိညာဏက္ခန္ဓာသာလျှင် ပြဋ္ဌာန်းခြင်း ရှိကုန်၏။ (ဝါ) ဝိညာဏက္ခန္ဓာသာလျှင် ရှေ့သွား ရှိကုန်၏။
မနောသေဋ္ဌာ = ဝိညာဏက္ခန္ဓာသာလျှင် အကြီးအမှူး ရှိကုန်၏။
မနောမယာ = ဝိညာဏက္ခန္ဓာဖြင့် ပြီးကုန်၏။
ယော ပုဂ္ဂလော = အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်။
ပဒုဋ္ဌေန = ပြစ်မှားလိုသော။
မနသာ = စိတ်ဖြင့်။
စေဘာသတိဝါ = အကယ်၍ ပြုမူလည်း ပြုငြားအံ့။
တတော = ထိုသို့ ပြစ်မှားလိုသော စိတ်ဖြင့် ဆိုခြင်း ပြုခြင်းတို့ကြောင့်။
နံ ပုဂ္ဂလံ = ထိုပုဂ္ဂိုလ်သို့။
ဒုက္ခံ = ဆင်းရဲသည်။
အနွေတိ = အစဉ် လိုက်တတ်၏။
ကိမိဝ = အဘယ်ကဲ့သို့နည်းဟူမူကား။
စက္ကံ = လှည်းဘီးသည်။
ဝဟတော = ဝန်ဆောင်သော နွားလား၏
ပဒံ = ခြေရာသို့။
အနွေတိ ဣဝ = အစဉ် လိုက်သကဲ့သို့တည်း။
မြန်မာပညာရှိ ဆရာကြီး ဦးဖိုးလတ်၏ ‘မြန်မာလို ဓမ္မပဒ တရားလမ်းစဉ်’ စာအုပ်ငယ်၌ ဤသို့ မြန်မာပြန်ထား၏။
“စိတ်သည် နာမ်တရားတို့၏ ရှေ့ဆောင် ကြီးမှူး ဖန်တီးသူ ဖြစ်၏။
အကြင်သူသည် မကောင်း ယုတ်မာသော စိတ်ဖြင့် ပြောသော်လည်းကောင်း၊ ပြုသော်လည်းကောင်း
လှည်းဘီးသည် နွား၏ ခြေရာနောက်သို့ လိုက်သကဲ့သို့ ဆင်းရဲခြင်းသည် ထိုသူ၏ နောက်သို့ ထက်ကြပ်မကွာ လိုက်လေ၏။”
ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်၏ မြန်မာပြန် ဓမ္မပဒမှာ ဤသို့ ဖြစ်၏။
ပြောမှား ပြုမှား လုပ်မိငြား
Posted by LokaChantha at 3:19 PM No comments:
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၉ ရက် စနေနေ့တွင် နယူးယောက်မြို့၌ နှင်းမုန်တိုင်းကျရောက်ကာ ရာသီဥတု ဆိုးရွားသဖြင့် လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ အပတ်စဉ် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော အဘိဓမ္မာသင်တန်းနှင့် စနေနေ့ တရားပွဲတို့ကို မပြုလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပေ။
၂၀၀၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက် စနေနေ့တွင် (၉)ပတ်မြောက် အဘိဓမ္မာသင်တန်းနှင့် စနေနေ့ တရားပွဲကို လောကချမ်းသာဘုရားကျောင်း၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့၏။
ပထမဦးစွာ လောကချမ်းသာဆရာတော်က သင်ကြား ပို့ချခဲ့ပြီးသော စိတ်အကျဉ်း ၈၉ ပါး၊ အကျယ် ၁၂၁ ပါးတို့ကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်လည် ရှင်းပြပေး၏။
ဆရာတော် ဦးသီလာနန္ဒာဘိဝံသ၏ သင်တန်းပို့ချချက်တွင် လောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်အကြောင်း ထပ်မံ ရှင်းပြပြီး စိတ်အကျဉ်း ၈၉ ပါး၊ အကျယ် ၁၂၁ ပါးတို့ကို အကျဉ်းချုပ် ပြန်လည် ရှင်းပြကာ ဇာတိဘေဒ, ဝေဒနာဘေဒအားဖြင့် စိတ်များကို သရုပ်ခွဲပြလေသည်။
“စိတ် (၈၉) ပါး အသေးစိတ် အရေအတွက်”
“အကုသိုလ်စိတ် ၁၂ ပါး”
‘လောဘမူစိတ် = လိုချင်မှုကို အခြေခံပြီး ဖြစ်တဲ့ စိတ် ၈-ပါး’
၁။ သူတစ်ပါး သားမယားကို လွန်ကျူးမှု၊ သူတစ်ပါး ပစ္စည်းကို မတရားယူမှုတွေကို အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆပြီး၊ သူတစ်ပါး မတိုက်တွန်းဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ပထမ လောဘမူ စိတ်)။
၂။ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် သူတစ်ပါး တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ဒုတိယ လောဘမူ စိတ်)။
၃။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်လဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (တတိယ လောဘမူ စိတ်)။
၄။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (စတုတ္ထ လောဘမူ စိတ်)။
၅။ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆပြီး သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် သာမန်စိတ် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု)နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ပဉ္စမ လောဘမူ စိတ်)။
၆။ အပြစ်မရှိဘူးလို့ ယူဆတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန်စိတ် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု)နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ဆဋ္ဌမ လောဘမူ စိတ်)။
၇။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင်လဲ သာမန်စိတ် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု)နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (သတ္တမ လောဘမူ စိတ်)။
၈။ အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတစ်ပါး တိုက်တွန်းလို့ သာမန်စိတ် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု)နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (အဋ္ဌမ လောဘမူ စိတ်)။
‘ဒေါသမူစိတ် = စိတ်ဆိုးမှုကို အခြေခံဖြစ်တဲ့ စိတ် ၂-ပါး’
၁။ အသက်သတ်တဲ့အခါ၊ သူတစ်ပါးကို ပျက်စီးစေရန် ကြံစည်တဲ့အခါ၊ ရိုင်းစိုင်း ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုတာတွေကို သူတစ်ပါး မတိုက်တွန်းဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ပထမ ဒေါသမူ စိတ်)။
၂။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ အဲဒီအလုပ်တွေကို မလုပ်ချင် လုပ်ချင်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ဒုတိယ ဒေါသမူ စိတ်)။
‘မောဟမူစိတ် = အမှန်မသိမှုကို အခြေခံပြီး ဖြစ်တဲ့ စိတ် ၂-ပါး’
၁။ သာမန် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု) သဘောရှိပြီး အမှန်တရားကိုပင် ယုံမှား သံသယဖြစ်တဲ့ စေတသိက်(ဝိစိကိစ္ဆာ)နဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ စိတ် (ပထမ မောဟမူ စိတ်)။
၂။ သာမန် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု) သဘောရှိပြီး ပျံ့လွင့်မှုသဘော(ဥဒ္ဓစ္စ) စေတသိက်နဲ့ အတူဖြစ်တဲ့ စိတ် (ဒုတိယ မောဟမူ စိတ်)။
အဟိတ်စိတ် (ဟိတ်လို့ အမည်ရတဲ့ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟ၊ အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟ သဘောတရားတွေနဲ့ အတူ မဖြစ်တဲ့ စိတ်)
‘အဟိတ် အကုသလဝိပါက်စိတ် ၇-ပါး’
မကောင်းမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ စိတ် (အကုသလ ဝိပါက်စိတ်)
သာမန် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု) ရှိတဲ့ -
၁။ မနှစ်သက်စရာ ရုပ်အဆင်းကို မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဉ် စိတ်)။
၂။ မနှစ်သက်စရာ အသံကို ကြားသိစိတ် (သောတဝိညာဉ် စိတ်)။
၃။ မနှစ်သက်စရာ အနံ့ကို နံသိစိတ် (ဃာနဝိညာဉ် စိတ်)။
၄။ မနှစ်သက်စရာ အရသာကို သိစိတ် (ဇိဝှါဝိညာဉ် စိတ်)။
၅။ မနှစ်သက်စရာ အာရုံကို လက်ခံတဲ့ စိတ် (သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း စိတ်)။
၆။ မနှစ်သက်စရာ အာရုံကို စုံစမ်းစိတ် (သန္တီရဏ စိတ်)။
၇။ မနှစ်မြို့ဖွယ် ခံစားမှုနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ အတွေ့အထိကို ခံစားစိတ် (ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဉ် စိတ်)။
ကောင်းမှုရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ စိတ် (အဟိတ် ကုသလဝိပါက်စိတ်)
အလယ်အလတ် ခံစားမှုရှိတဲ့ -
၁။ ကောင်းတဲ့ အာရုံကို မြင်တဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဉ် စိတ်)။
၂။ ကောင်းတဲ့ အသံကို ကြားတဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ ကြားသိစိတ် (သောတဝိညာဉ် စိတ်)။
၃။ ကောင်းတဲ့ အနံ့ကို နံတဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ နံသိစိတ် (ဃာနဝိညာဉ် စိတ်)။
၄။ ကောင်းတဲ့ အစားအစာကို စားတဲ့အခါ ဖြစ်တဲ့ စားသိစိတ်၊ အရသာခံစိတ် (ဇိဝှါဝိညာဉ် စိတ်)။
၅။ ကောင်းတဲ့ အာရုံကို လက်ခံတဲ့ စိတ် (သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း စိတ်)။
၆။ ကောင်းတဲ့ အာရုံကို စုံစမ်းတဲ့ စိတ် (ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏ စိတ်)။
၇။ နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ ကောင်းတဲ့ အာရုံကို စုံစမ်းတဲ့ စိတ် (သောမနဿသဟဂုတ် သန္တီရဏ စိတ်)။
၈။ ချမ်းသာမှု သဘောရှိတဲ့ ကောင်းတဲ့ အရာကို ထိသိစိတ် (သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဉ် စိတ်)။
သာမန် (အလယ်အလတ် ခံစားမှု)နဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ -
၁။ ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း စိတ်။
၂။ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း စိတ်။
၃။ နှစ်သက် ဝမ်းမြောက်မှု ရှိတဲ့ ဟသိတုပ္ပါဒ် စိတ်။
‘ကာမာဝစရကုသိုလ်စိတ်၊ မဟာကုသိုလ်စိတ် ၈-ပါး’
၁။ အလှူပေးခြင်း စတဲ့ ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ပထမ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၂။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ဒုတိယ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၃။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (တတိယ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၄။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (စတုတ္ထ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၅။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ပဉ္စမ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၆။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ဆဋ္ဌမ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၇။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှု စိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (သတ္တမ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
၈။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (အဋ္ဌမ ကာမကုသိုလ်စိတ်)။
ဒီ ကာမကုသိုလ်စိတ်ကိုပဲ “မဟာကုသိုလ်စိတ်”လို့ ခေါ်သေးတယ်။
အကြောင်းက ရူပကုသိုလ်စိတ်၊ အရူပကုသိုလ်စိတ်တွေထက် အရေအတွက် များလို့ပဲ။ ရူပကုသိုလ်စိတ်က ၅-ခု ရှိပြီး၊ အရူပကုသိုလ်စိတ်က ၄-ခုပဲ ရှိတယ်။
‘ကာမာဝစရဝိပါက်စိတ်၊ မဟာဝိပါက်စိတ် ၈-ပါး’
၁။ အလှူပေးခြင်း စတဲ့ ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ပထမ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၂။ သူတစ်ပါး တိုက်တွန်းလို့ ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုတယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ဒုတိယ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၃။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (တတိယ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၄။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (စတုတ္ထ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၅။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ပဉ္စမ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၆။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ဆဋ္ဌမ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၇။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုနဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (သတ္တမ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
၈။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (အဋ္ဌမ ကာမဝိပါက်စိတ်)။
‘ကာမာဝစရကြိယာစိတ်၊ မဟာကြိယာစိတ် ၈-ပါး’
၁။ အလှူပေးခြင်းစတဲ့ ကောင်းမှုတစ်ခုခုကို သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ ပြုလုပ်ရုံသက်သက်ပဲ ဖြစ်ပြီး အကျိုးမပေးတော့တဲ့ စိတ် (ပထမ ကာမကြိယာစိတ်)။
၂။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ဒုတိယ ကာမကြိယာစိတ်)။
၃။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (တတိယ ကာမကြိယာစိတ်)။
၄။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ ဝမ်းမြောက်စွာ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (စတုတ္ထ ကာမကြိယာစိတ်)။
၅။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်းရဘဲ မိမိကိုယ်တိုင် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်ပြီး သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ပဉ္စမ ကာမကြိယာစိတ်)။
၆။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်နဲ့ ယှဉ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ဆဋ္ဌမ ကာမကြိယာစိတ်)။
၇။ သူတစ်ပါးက မတိုက်တွန်း၊ ဒါပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တဲ့အခါ ဉာဏ်နဲ့ မယှဉ်ဘဲ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (သတ္တမ ကာမကြိယာစိတ်)။
၈။ သူတစ်ပါးက တိုက်တွန်းလို့ သာမန် အလယ်အလတ် ခံစားမှုစိတ်နဲ့ ပြုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်မပါဘူး။ အဲဒီအခါ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (အဋ္ဌမ ကာမကြိယာစိတ်)။
၁။ ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ ငါးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ရူပ ပထမဈာန် ကုသိုလ်စိတ်)။
၂။ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ လေးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ရူပ ဒုတိယဈာန် ကုသိုလ်စိတ်)။
၃။ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ သုံးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ရူပ တတိယဈာန် ကုသိုလ်စိတ်)။
၄။ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ရူပ စတုတ္ထဈာန် ကုသိုလ်စိတ်)။
၅။ ဥပေက္ခာ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ် (ရူပ ပဉ္စမဈာန် ကုသိုလ်စိတ်)။
၁။ ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ ငါးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ရူပ ပထမဈာန် ဝိပါက်စိတ်)။
၂။ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ လေးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ရူပ ဒုတိယဈာန် ဝိပါက်စိတ်)။
၃။ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ သုံးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ရူပ တတိယဈာန် ဝိပါက်စိတ်)။
၄။ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ရူပ စတုတ္ထဈာန် ဝိပါက်စိတ်)။
၅။ ဥပေက္ခာ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကုသိုလ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ် (ရူပ ပဉ္စမဈာန် ဝိပါက်စိတ်)။
၁။ ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ ငါးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ပြုလုပ်ရုံသက်သက်ပဲဖြစ်ပြီး အကျိုးမပေးတော့တဲ့ စိတ် (ရူပ ပထမဈာန် ကြိယာစိတ်)။
၂။ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ လေးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ရူပ ဒုတိယဈာန် ကြိယာစိတ်)။
၃။ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ သုံးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ရူပ တတိယဈာန် ကြိယာစိတ်)။
၄။ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ရူပ စတုတ္ထဈာန် ကြိယာစိတ်)။
၅။ ဥပေက္ခာ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ကြိယာစိတ် (ရူပ ပဉ္စမဈာန် ကြိယာစိတ်)။
အရူပါဝစရစိတ်တွေက ပဉ္စမဈာန်စိတ် အမျိုးအစားမှာ ပါတယ်။
‘အရူပါဝစရ ကုသိုလ်ကံ’ဆိုတာ အပ္ပနာဈာန်ကိုရောက်တဲ့ ဘာဝနာကြောင့် ဖြစ်တဲ့ မနောကံ တစ်မျိုးပဲ။
အရူပကုသိုလ်စိတ်ဟာ ကောင်းကင်ပညတ် စတဲ့ အာရုံ အမျိုးအစားအပေါ် မူတည်ပြီး လေးမျိုး ကွဲပြားတယ်။
၁။ ကောင်းကင်ပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာသာနဉ္စာယတနကုသိုလ်စိတ်။
၂။ အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ ဝိညာဏဉ္စာယတနကုသိုလ်စိတ်။
၃။ နတ္ထိဘာဝပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာကိဉ္စညာယတနကုသိုလ်စိတ်။
၄။ အာကာကိဉ္စညာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ နေဝသညာနာသညာယတနကုသိုလ်စိတ်။
၁။ ကောင်းကင်ပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာသာနဉ္စာယတနစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ်။
၂။ အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ ဝိညာဏဉ္စာယတနစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ်။
၃။ နတ္ထိဘာဝပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာကိဉ္စာညာယတနစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ်။
၄။ အာကာကိဉ္စညာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ နေဝသညာနာသညာယတနစိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ (ဝိပါက်)စိတ်။
၁။ ကောင်းကင်ပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာသာနဉ္စာယတနကြိယာစိတ်။
၂။ အာကာသာနဉ္စာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ ဝိညာဏဉ္စာယတနကြိယာစိတ်။
၃။ နတ္ထိဘာဝပညတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ အာကာကိဉ္စညာယတနကြိယာစိတ်။
၄။ အာကာကိဉ္စညာယတနဈာန်စိတ်ကို အာရုံပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ နေဝသညာနာသညာယတနကြိယာစိတ်။
‘မဂ်စိတ်’၊ ‘လောကုတ္တရာကုသိုလ်စိတ် ၄-ပါး’
၁။ သောတာပတ္တိ မဂ်စိတ်။
၂။ သကဒါဂါမိ မဂ်စိတ်။
၃။ အနာဂါမိ မဂ်စိတ်။
၄။ အရဟတ္တ မဂ်စိတ်။
‘ဖိုလ်စိတ်’၊ ‘လောကုတ္တရာဝိပါက်စိတ်’ ၄-ပါး
(မဂ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ စိတ်)
၁။ သောတာပတ္တိ ဖိုလ်စိတ် (သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်ရဲ့နောက် တစ်ဆက်တည်းဖြစ်တဲ့ သောတပတ္တိမဂ်စိတ်ရဲ့ အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ ဝိပါက်စိတ်)။
၂။ သကဒါဂါမိ ဖိုလ်စိတ်။
၃။ အနာဂါမိ ဖိုလ်စိတ်။
၄။ အရဟတ္တ ဖိုလ်စိတ်။
“လောကုတ္တရာစိတ် အကျယ် ၄၀”
မဂ်စိတ်လေးပါးနဲ့ ဖိုလ်စိတ်လေးပါးကို “လောကုတ္တရာစိတ် ၈-ပါး”လို့ ခေါ်တယ်။
ဒီလောကုတ္တရာစိတ် ၈-ပါးကို ပထမဈာန်၊ ဒုတိယဈာန်၊ တတိယဈာန်၊ စတုတ္ထဈာန်၊ ပဉ္စမဈာန်တွေနဲ့ မြှောက်ပွားလိုက်ရင် (၈x၅=၄၀) လောကုတ္တရာစိတ် လေးဆယ် ဖြစ်တယ်။
ဥပမာ - သောတာပတ္တိမဂ်စိတ် (၅)ပါး။
၁။ ဝိတက်၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ ငါးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ပထမဈာန် သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်။
၂။ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ လေးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ဒုတိယဈာန် သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်။
၃။ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ သုံးပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ တတိယဈာန် သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်။
၄။ သုခ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ စတုတ္ထဈာန် သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်။
၅။ ဥပေက္ခာ၊ ဧကဂ္ဂတာ ဆိုတဲ့ ဈာန်အင်္ဂါ နှစ်ပါးနဲ့အတူ ဖြစ်တဲ့ ပဉ္စမဈာန် သောတာပတ္တိမဂ်စိတ်။
ဒီလိုပဲ ကျန်တဲ့ သကဒါဂါမိမဂ်စိတ်၊ အနာဂါမိမဂ်စိတ်၊ အရဟတ္တမဂ်စိတ်၊ သောတာပတ္တိဖိုလ်စိတ်၊ သကဒါဂါမိဖိုလ်စိတ်၊ အနာဂါမိဖိုလ်စိတ်၊ အရဟတ္တဖိုလ်စိတ်တွေမှာလဲ ဈာန်အင်္ဂါ ငါးပါးစီ ဖြစ်နိုင်တယ်။
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ဤ နဝမမြောက်အပတ်တွင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပို့ချချက်များ ပြီးဆုံးသွားသောကြောင့် လောကချမ်းသာဆရာတော်က သင်တန်းသူ သင်တန်းသားများကို ချီးမြှောက် အားပေးသောအားဖြင့် “အဘိဓမ္မာသင်တန်း ပို့ချချက်များ၊ ‘စိတ်ပိုင်း’” “သင်ယူ လေ့လာပြီးသူများ ဂုဏ်ပြုလွှာ”ကို ပေးအပ်လေသည်။
အဘိဓမ္မာသင်တန်း ပြီးသောအခါ ခေတ္တ အနားယူကြပြီး၊ ဆရာတော် အရှင်စက္ကိံန္ဒက ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါး ရှိခိုးကို တိုင်ပေးခြင်း၊ ငါးပါးသီလချီးမြှင့်ခြင်း၊ မေတ္တာဘာဝနာပွားများခြင်း စသည့် တရားမဟောမီ ရှေးဦးစွာ ပြုခြင်းများကို ပြုလုပ်၍ အရှင်စက္ခပါလမထေရ်အကြေင်း အဆက်ဖြစ်သော “ဒေါသရှေ့ထား သူ့အမှား” တရားတော်ကို ဟောကြား၏။
မျက်စိကွယ်သွားသော စက္ခုပါလမထေရ်သည် အတိတ်ဘဝက ဆေးဆရာ ဖြစ်ခဲ့သည်။
မျက်စိဝေဒနာသည် လူနာတစ်ဦးက ဆေးဖိုးဝါးခ မည်ရွေ့မည်မျှ ပေးပါမည်ဟု ကတိခံကာ ဆေးဆရာ၏ အကုအသကို ခံယူခဲ့သည်။ မျက်စိဝေဒနာ ကောင်းစွာ ပျောက်ကင်း ချမ်းသာပြီးသည့်နောက်တွင် လူနာက ကတိခံခဲ့သော ဆေးဖိုးဝါးခကို မပေးလိုသဖြင့် မျက်စိဝေဒနာမှာ ယခင်ကထက် ဆိုးရွားလာကြောင်း လိမ်လည် ပြောဆိုသည်။
အမှန်ကို သိသော ဆေးဆရာက ကောက်ကျစ်သော လူနာအား “ဒေါသစိတ်”ဖြင့် မျက်စဉ်းခတ်ကာ တကယ် မျက်စိကန်းသွားအောင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လှည်းဆွဲနွား၏ ခြေရာနောက် လှည်းဘီးသည် မသွေမဖည် လိုက်သကဲ့သို့ အကုသိုလ်အကျိုး ဆင်းရဲဒုက္ခ လိုက်ပုံကို ပြသော သာဓက ဖြစ်၏။
တရားပွဲအပြီးတွင် ဆယ်မိနစ်ခန့် ဝိပဿနာတရား ရှုမှတ်ကြပြီး၊
ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကို သတ္တဝါအားလုံးတို့အား အမျှပေးဝေကြလေသည်။
အရှင်ပညာသီဟ၏ “သိမှတ်ဖွယ်ရာ အဘိဓမ္မာ”
သုခ၏ “စိတ်ဆိုသောစိတ်နှင့် ဝဉ္စနာဒီပနီ”
Posted by LokaChantha at 2:17 PM No comments:
ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရခေတ်၊ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၂၄၊ ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၄၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၁၁+၁၂+၁၃+၁၄ ရက်၊ ခရစ်နှစ် ၁၉၈၀ ခုနှစ် မေလ ၂၄+၂၅+၂၆+၂၇ နေ့များတွင် ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ မဟာပါသာဏလိုဏ်ဂူတော်ကြီး၌ သာသနာတော် သန့်ရှင်း တည်တံ့ ပြန့်ပွားရေးကို ရည်မှန်းချက် ထားရှိ၍ ပဲခူး-မြို့မဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဣန္ဒာစာရ (ထိုစဉ်က အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ နောင်အခါ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ ပျံလွန်) ဦးဆောင်သော ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အစည်းအဝေးပွဲကြီး ဖြစ်မြောက်ရေး သံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော် ၆၆-ပါးတို့ ကြီးမှူးပြီး မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ သံဃာတော် တစ်သိန်းကျော် (ထိုစဉ်က သံဃာဦးရေ) တို့၏ ကိုယ်စား သံဃသမ္မုတိရ သံဃာ့ကိုယ်စားလှယ် ဆရာတော် (၁၈၁၂)ပါး တက်ရောက်လျက် ပထမအကြိမ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးကို တညီတညွတ်တည်း ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်။
ပထမအကြိမ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အစည်းအဝေးကြီးက အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဝိနည်းဓမ္မကံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအရ ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများကို ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ပထမ အထူးအစည်းအဝေးက “ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ”ကို ပြဋ္ဌာန်းပေးသည့် ဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီအရ ဝိနည်းဓမ္မကံမှုခင်းများကို စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ရာတွင် မြို့နယ်သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်/တိုင်း သံဃဝိနိစ္ဆအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော် သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ ဟူ၍ အဆင့်သုံးဆင့် ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားရှိသည်။
ထိုကဲ့သို့ သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့များကို အဆင့်ခွဲခြားထားခဲ့သော်လည်း ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များကိုမူ အဆင့်ခွဲခြားမှု မပြုဘဲ တပြေးညီ တစ်မျိုးတစ်စားတည်းသာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဖွဲ့စည်းပေးသည့် သံဃနာယကအဖွဲ့၏ အဆင့်ကို လိုက်၍ ခွဲခြား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးလျှင် မြို့နယ်သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
တဖန် ပြည်နယ်/တိုင်း သံဃနာယကအဖွဲ့က ယင်းမြို့နယ်ဝိနည်းဓိုရ်များဖြင့်ပင် ဖွဲ့စည်းပေးလျှင် ပြည်နယ်/တိုင်း သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ဟု ခေါ်၍ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ဖွဲ့စည်းပေးလျှင် နိုင်ငံတော် သံဃဝိနိစ္ဆယအဖွဲ့ဟု ခေါ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝိနည်းဓိုရ်များ၏ အရည်အချင်းကို လိုက်၍ အချို့သော နိုင်ငံတော် ဝိနိစ္ဆယ ဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ နည်းယူ စံပြုထိုက်သော်လည်း အချို့သော နိုင်ငံတော် ဝိနိစ္ဆယဆုံးဖြတ်ချက်များမှာ မြို့နယ်အဆင့်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းအဆင့် ဝိနိစ္ဆယများလောက်ပင် အရည်အသွေး ပြည့်မှု မရှိသည်ကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။
ယင်း ဟာကွက်ပျော့ကွက်များကို ဖြည့်စွက်နိုင်ရန်အတွက် ၁၃၄၇ ခုနှစ် နယုန်လတွင် ကျင်းပသော ဒုတိယအကြိမ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အစည်းအဝေးပွဲကြီးမှ ရွေးချယ် တင်မြှောက်လိုက်သည့် ဒုတိယအကြိမ် နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင်အဖွဲ့ ပထမ အစည်းအဝေးကြီးက ဝိနည်း ဓမ္မကံ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများကို ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြသည်။
ယင်း ပြင်ဆင် ဖြည့်စွက်ချက်များအရ မြို့နယ်ဝိနည်းဓိုရ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဝိနည်းဓိုရ်များအဖြစ် ရှေးဦးစွာ ခွဲခြား၍ ရွေးချယ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။
ထိုမြို့နယ်ဝိနည်းဓိုရ်၊ ပြည်နယ်/တိုင်းဝိနည်းဓိုရ်များ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မကျေနပ်၍ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သို့ အယူခံ စောဒနာလွှာ တင်သွင်းလာသော ဝိနည်းဓမ္မကံမှုခင်းများ တိကျ မှန်ကန်စွာ ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်ဗဟိုသံဃဝန်ဆောင် ဆရာတော် အပါး ၃၀၀ ထဲမှ ဝိနိစ္ဆယဆုံးဖြတ်မှု၌ လိမ္မာကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ သိက္ခာဝါကြီးရင့်ခြင်း ဂုဏ်တို့နှင့် ပြည့်စုံသော ဆရာတော်ကြီးများကို နိုင်ငံတော် ဝိနည်းဓိုရ်အဖြစ် ရွေးချယ် သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။
ရွေးချယ်ထားသည့် ၎င်းနိုင်ငံတော် ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီးများထဲမှ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ၊ အပရဂေါယာနကျောင်းဆောင်၌ လေးလတိုင်တိုင် သီတင်းသုံးနေထိုင်၍ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမည့် နိုင်ငံတော် ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီး ၁၅-ပါးကို ၅-ပါးလျှင် တစ်ဖွဲ့စီ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ယင်း ဆရာတော်ကြီးများက ဝိနည်း ဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်း မှုခင်းများကို ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်များ
“နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သည် အဓိကရုဏ်း လေးမျိုးတို့အနက် သာသနာတော် တစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဓမ္မ အဓမ္မစသော အငြင်းပွားသည့် မှုခင်းများကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာ နိုင်ငံတော် ဗဟိုသံဃာ့ဝန်ဆောင် ဆရာတော်များထဲမှ သင့်လျော်သော အရေအတွက်ဖြင့် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ကို တိုက်ရိုက် ဖွဲ့စည်းပေးရမည်”ဟု ဝိနည်း ဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ စာအုပ်၏ အခန်း (၆)၊ ပုဒ်မ (၅၇)၌ နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စပ်၍ စည်းမျဉ်းရေးဆွဲထားခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော် ဗဟိုဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီးများကို ဆုံးဖြတ်ရမည့် ဝိနိစ္ဆယအားလျော်စွာ (၅)ပါးမှ (၇)ပါးအထိ ပါဝင်စေလျက် နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များအဖြစ် အဖွဲ့အမှတ် (၁)၊ အဖွဲ့အမှတ် (၂) စသည်ဖြင့် ဖွဲ့စည်း၍ လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒဝိနိစ္ဆယ၊ ကျောက်သင်္ဘောဝါဒ၊ ကြောင်ပန်းတောရဝါဒ၊ ကျောက်ပုံတောရဝါဒ၊ မိုးညိုဆရာတော်ဝါဒ၊ ရေတာရှည်အရှင်မာလာဝရဝါဒ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောင်မြို့နယ် ကျောင်းဖြူကျေးရွာ ဦးထင်၏ ထွန်တုံးလက်ကျန်ဝါဒ၊ ဉာဏစာဂီဝါဒများကို ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောတော်မူသော ထေရဝါဒ ပိဋကတော်များနှင့် ဆန့်ကျင်လျှင် “အဓမ္မဝါဒ”ဟုလည်းကောင်း၊ ယင်းဝါဒများကို ရေးသား ဟောပြောကြသူ၊ လိုက်နာ ကျင့်ကြံ ကြိုးကုတ် အားထုတ်ကြသူနှင့် လိုလား နှစ်သက်စွာ ထောက်ခံ အားပေးကြသူ ရဟန်း ရှင် လူများကို “အဓမ္မဝါဒီ”တို့သာ မည်ကုန်၏ဟုလည်းကောင်း ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ကြသည်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောတော်မူသော ထေရဝါဒ ပိဋကတော်များနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင်မူ “ဓမ္မဝါဒ”ဟု ဆုံးဖြတ်စေခဲ့ကြသည်။
ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သမိုင်းတလျှောက်တွင် အဓမ္မဝါဒီ (ထေရဝါဒပိဋကတော်များနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အခြားသော အယူအဆများကို လက်ခံကျင့်သုံးနေသည့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ တပည့်အမည်ခံပုဂ္ဂိုလ်)များသည် ခေတ်ကာလမျိုးစုံ၌ တခါတရံ ပေါ်ပေါက်လာကြစမြဲပင် ဖြစ်ခဲ့၏။
ထိုသို့သော ခေတ်များ၌ ဆရာတော် သံဃာတော်များနှင့် အာဏာပိုင်အစိုးရမင်းများ၏ ဓမ္မစက် အာဏာစက်တို့ဖြင့် ဖြိုဖျက် နှိပ်ကွပ်သောကြောင့် အဓမ္မဝါဒီများ ပပျောက်ခဲ့ကြလေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတော်တွင် ဆဋ္ဌသံဂါယနာတင်ပြီးနောက်ပိုင်း ၁၉၅၄-၅ ခုနှစ်၌ တောင်တွင်းကြီးမြို့၊ နတ်မှီတောရကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌက “မနုနော အပစ္စံ၊ အကံသု ဝိဂ္ဂဟာ ပုရာ၊ တသ္မာ ပေါရာဏော မနု၊ မနုဝ ပုန ပစ္စတေ” ဟူသော ပါဠိဂါထာနှင့် “လူသေလျှင် လူမဖြစ် ဘာဖြစ်မှာတုန်း? ရွှေပျက်လျှင် မြေထွက်နွယ် အဝင်ပေမို့၊ တကယ်ပင် လူပြန်ဖြစ်တယ်ကွယ် လောကစံထုံး”ဟူသော ကဗျာကို မူထား၍ “လူသေလူဖြစ်” နာမည်ဖြင့် ကျမ်းစာအုပ်ကို ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့၏။
လူသေလူဖြစ်နာမည် တပ်ထားသော်လည်း ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ ဝါဒသည် ရုပ်ဝါဒ၊ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ရုပ်ကြမ်းဝါဒီသာ ဖြစ်၏။
ထိုခေတ်က ရဟန်း ရှင်လူ ပြည်သူလူထုသည် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌအား ကျမ်းစာအုပ်တွေ ရေးသား၍လည်းကောင်း၊ ပကာသနီယကံပြု၍လည်းကောင်း နည်းမျိုးစုံဖြင့် တုံ့ပြန် ခုခံခဲ့သော်လည်း အာဏာစက်နှင့် ဓမ္မစက် နှစ်မျိုးလုံး တညီတညွတ်တည်း မပါရှိခြင်း၊ နောက်လိုက် ရုပ်ကြမ်းဝါဒီများက အင်အားကောင်းခြင်းကြောင့် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌတို့လူစု ပေါ်ပြူလာဖြစ်ပြီး မိုးကောင်းခဲ့ကြသည်။
ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် ကိုရင်ကြီးအရွယ်မှ စပြီး ရဟန်ငယ်အရွယ်အထိ မန္တလေးမြို့ အနောက်ပြင် မဟာဝိသုဒ္ဓါရုံတိုက်သစ် (ရွှေကျင်ဂိုဏ်း၊ ဗဟိုဌာန)၊ ရွှေကျင်နိကာယ ဒုတိယမြောက် သာသနာပိုင်၊ မဟာဝိသုဒ္ဓါရာမ ဆရာတော်ဘုရားကြီးအထံတော်တွင် နေထိုင်ခဲ့ပြီး၊ ယင်း ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် အဘယာရာမဆရာတော် အရှင်အဂ္ဂဓမ္မာဘိဝံသတို့၏ထံမှာ စာပေ ပရိယတ်များကို သင်ကြားခဲ့ဖူးသည်။
အရှင်အာဒိစ္စဝံသ (နောင်တွင် - ဆရာကြီးဦးအောင်မြတ်ထွတ်) စသည့် အခြားသော ဆရာတော်များ၏အထံမှာလည်း လောကုတ္တရာပညာရပ်များကို သင်ကြားခဲ့ပြီး လောကီ အင်္ဂလိပ်စာများကိုပါ သင်ကြားခဲ့၏။
ထို့နောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ကြွ၍ အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ စသော ဘာသန္တရစာပေများကို သင်ကြားခဲ့၏။
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြန်ကြွလာပြီးနောက် ဆရာတော်ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် သာသနာ့ဘောင်မှာ ရဟန်းဝတ်ဖြင့် နေသော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကြွင်းမဲ့ မယုံကြည်တော့ချေ။ သူ၏ ဆရာဖြစ်သော အရှင်အာဒိစ္စဝံသက ပိဋကသုံးပုံ နိကာယ်ငါးရပ် ပါဠိအဋ္ဌကထာ ဋီကာများတွင် ပါဠိတော်များကို ဘုရားဟောဟု လက်ခံ ယူဆခဲ့သော်လည်း ရှင်ဥက္ကဋ္ဌကမူ အဋ္ဌကထာ ဋီကာများတင်မက ပါဠိတော်များကိုပင် ဘုရားဟောဟု လက်မခံတော့ပါ။
ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ဘုရားဟော ပါဠိတော်ဟု ယုံကြည် လက်ခံထားသည့် ကျမ်းစာများက ဆဋ္ဌသံဂါယနာမူအားဖြင့် အုပ်ရေ ၄၀ ရှိရာ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ဓမ္မစကြာ၊ အနတ္တလက္ခသုတ်နှင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် ပါဠိတော်တို့ကိုသာ (စာမျက်နှာအားဖြင့် ၃၀ လောက်ကိုသာ) ဗုဒ္ဓဝစနပါဠိ (ဘုရားဟောပါဠိတော်)ဟု လက်ခံ ယူဆခဲ့၏။
ထိုသို့ လက်ခံသော်လည်း အားလုံးကို လက်မခံဘဲ သူ့အယူအဆနှင့် ကိုက်ညီသော စကားရပ်အချို့ကိုသာ လက်ခံပြီး၊ သူ့ အယူအဆနှင့် မကိုက်ညီလျှင် ဘုရားဟော မဟုတ်၊ ကုလားဟောဟုလည်းကောင်း၊ ဗြဟ္မဏဟောဟုလည်းကောင်း၊ ဟိန္ဒူဝါဒဟုလည်းကောင်း ရေးသား ဟောပြော၍ အားလုံးကို ပစ်ပယ်ခဲ့သည်။
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ စသော ဘာသန္တရစာပေများကိုလည်း ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်ထားသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံဖြစ် ဒါဝင်ဝါဒကို လက်ခံ ယုံကြည်ပြီး လူသေလူဖြစ်စာအုပ်ကို ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်း ဖြစ်၏။
ဒါဝင်ဝါဒအရ လူသည် အီဗော်လူးရှင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အညီ မျောက်သတ္တဝါမှတဆင့် နောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်နေသော သတ္တဝါတစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ လူထက် နောက်တဆင့် တိုးတက် ဖြစ်စရာ မရှိတော့။ လူအဆင့်မှ ပြန်ပြီး လျှောကျရန်လည်း မဖြစ်နိုင်တော့ဟု ဆို၏။
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ထိုအချက်တို့ကို အခြေခံပြီး အကယ်၍ လူသေပြီးနောက် ဖြစ်ဦးမည်ဆိုလျှင် လူပင် ပြန်ဖြစ်ရမည်ဟု ဆိုပေသည်။ “အကယ်၍”ဟု ဆိုသဖြင့် လူသေပြီးနောက် ဘာမှ မဖြစ်ဘဲလည်း နေချင် နေရပေမည်ဟု ဆိုရာရောက်ပေသည်။
ဒါဝင်ဝါဒကို မူတည်ပြီး ရွှေသည် အန္တိမဓာတ် ဖြစ်နေ၍ ရွှေပျက်လျှင် ရွှေသာ ပြန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သတ္တဝါလောကတွင် အန္တိမနောက်ဆုံးအဆင့်သို့ ရောက်နေသော လူသည်လည်း အခြား ပြောင်းလဲဖြစ်စရာ မလိုဘဲ လူသာ ပြန်ဖြစ်ရမည်ဟု ဆို၏။
တဖန် မန်ကျည်းပင်မျိုးမှ တမာပင် ပေါက်ရိုး မရှိ။ မန်ကျည်းပင်သာ ပေါက်ရသည်။ ထိုနည်းတူစွာ လူမျိုးမှ လူပဲ ပြန်ဖြစ်ရမည်ဟု ရွှေနှင့် မန်ကျည်းပင်တည်းဟူသော သက်မဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ကို လူတည်းဟူသော သက်ရှိသတ္တဝါနှင့် ထပ်တူပြု၍ ရေးသားခဲ့၏။
ပိဋကစာပေသက်သက်ကို ကျွမ်းကျင်သော ဆရာတော် သံဃာတော်များအား အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ စသော ဘာသန္တရစာပေ အထောက်အထား သာဓကတွေကို ပြ၍လည်းကောင်း၊ ပိဋကစာပေ မကျွမ်းကျင်သော လူဝတ်ကြောင် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ပိဋကစာပေ အထောက်အထားတွေကို ပြ၍လည်းကောင်း မိမိဝါဒကို ယုံကြည် လက်ခံအောင် သမားဂုဏ်မျိုးစုံ ပြသခဲ့၏။
ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို တည်ထောင်သော်လည်း ယင်းလူသေလူဖြစ်ဝါဒက ဒုတိယ ဦးစားပေး ဝါဒသာ ဖြစ်၍ သူ၏ ပထမ ဦးစားပေး ဝါဒက “ဒိဋ္ဌ ဓမ္မော ပတ္တဓမ္မော ဝိဒိတဓမ္မော ပရိယောဂါဠဓမ္မော သန္ဒိဋ္ဌိကော အကာလိကော” စသော ပါဠိတော် အချို့အဝက်ကို အထောက်အထား ပြုပြီး ‘ပုခက်နှင့် ခေါင်းကြား’ ဟူသော ပစ္စုပ္ပန်တစ်ဘဝသာ ဖြစ်၏။
ထုံးအိုးထဲမှာ လက်ကို နှိုက်လျှင် နောက်တစ်ချိန် နောက်တစ်ရက် မဆိုင်းဘဲ လက်သည် ချက်ချင်း လက်ငင်း ဖြူသွားသကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ငရုတ်သီးစားလျှင် နောက်တစ်ချိန် နောက်တစ်ရက် မဆိုင်းဘဲ ချက်ချင်း လက်ငင်း စပ်သကဲ့သို့လည်းကောင်း၊ ယခု ဘဝမှာ ပြုလုပ်သော ကောင်းမှု မကောင်းမှုသည်လည်း (နောက်ဘဝ မရှိသောကြောင့်) ယခု ဘဝမှာပဲ အကျိုးပေးမည်၊ နောက်ဘဝကို စောင့်ဆိုင်းစရာ မလိုဟု ပစ္စုပ္ပန် တစ်ဘဝကိုသာ လက်ခံ၏။
စက္ခု=(မျက်စိ)၊ သောတ=(နား)၊ ဃာန=(နှာ)၊ ဇိဝှါ=(လျှာ)၊ ကာယ=(ကိုယ်) ငါးပါးကိုသာ ဆုပ်ကိုင်ထားပြီး ပကတိ မျက်စိဖြင့် မမြင်နိုင်၊ နားဖြင့် မကြားနိုင်၊ ကိုယ်ဖြင့် မတွေ့ထိနိုင်သော ရုပ်လွန်သဘာဝ ဖြစ်နေသည့် တမလွန်ဘဝကို လက်မခံဘဲ လက်ရှိ ပစ္စုပ္ပန်ဘဝကိုသာ လက်ခံသဖြင့် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌသည် တကယ့် ရုပ်ကြမ်းဝါဒီကြီးပင် ဖြစ်၏။
လူသေလူဖြစ် ဝါဒနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ
ပထမအကြိမ် ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ သံဃာ့အဖွဲ့အစည်းကြီး ပေါ်ပေါက်လာသည့်အခါ နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့က ၁၃၄၃ ခုနှစ် နယုန်လပြည့်ကျော် ၉ ရက် (၂၆-ဇွန်-၁၉၈၁)နေ့တွင် လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယအတွက် နိုင်ငံတော် ဗဟိုဝန်ဆောင် ဆရာတော်ကြီး အပါး ၃၀၀ ထဲမှ နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂)ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆရာတော်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းပြီး တာဝန် ပေးအပ်တော်မူခဲ့ကြသည်။
၁။ ဘဒ္ဒန္တဃောသိတာဘိဝံသ၊ ဃောသိတာရာမတိုက်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်း။ (သဘာပတိ)
[ယခု - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ ပျံလွန်]
၂။ ဘဒ္ဒန္တဇဝနာဘိဝံသ၊ ဇဝနာဘိဝံသာရုံကျောင်းတိုက်၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။ (အဖွဲ့ဝင်)
၃။ ဘဒ္ဒန္တဓမ္မာဘိဝရ၊ ကံတွင်းဆုတောင်းပြည့်ကျောင်းတိုက်၊ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးတိုင်း။ (အဖွဲ့ဝင်)
[ယခု - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ]
၄။ ဘဒ္ဒန္တကုမာရ၊ မဟာဝိသုတာရာမတိုက်၊ မကွေးမြို့၊ မကွေးတိုင်း။ (အဖွဲ့ဝင်)
[ယခု - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ အဘိဓဇအဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက၊ အဘိဓဇမဟာရဋ္ဌဂုရု၊ အကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်၊ နိုင်ငံတော်သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့]
၅။ ဘဒ္ဒန္တဉာနိက၊ ပဇ္ဇောတာရုံကျောင်းတိုက်၊ မြောင်းမြမြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်း။ (အဖွဲ့ဝင်)
[နောင် - အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ၊ ပျံလွန်]
နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့သည် စောဒက (တရားလို) ဆရာတော် လေးပါးတို့က တင်သွင်းသည့် သာမညစောဒနာလွှာ ၂၁ ချက်ကို (၃၀-ဇွန်-၁၉၈၁)နေ့တွင်လည်းကောင်း၊ ဝိသေသစောဒနာလွှာ ၂၁ ချက်ကို (၄-ဇူလိုင်-၁၉၈၁)နေ့တွင်လည်းကောင်း ကြားနာပြီး၊ စုဒိတက (တရားခံ) ပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦးတို့က ပြန်လည် တင်သွင်းသည့် သောဓနာ (ချေပလွှာ)များကို ၁၉၈၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ ရက်၊ ၉ ရက်နေ့များတွင် ကြားနာခဲ့ကြသည်။
တဖန် ယင်း စောဒနာ၊ သောဓနာ စာမူများနှင့်တကွ သက်ဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း၊ တိတ်ခွေ၊ ဓာတ်ပုံများကို (၉-ဇူလိုင်-၁၉၈၁)နေ့ ညနေမှ စ၍ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကြည့်ရှု နားထောင် သုံးသပ်ကြလျက် ဂန္ထန္တရစာပေများ အပါအဝင် ဆိုင်ရာ ပိဋကတ်တော်များနှင့် ညှိနှိုင်း တိုက်ဆိုင်ပြီး လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ စာတမ်းကို ရေးသားခဲ့ကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော် သီးခြားဝိနည်းဓိုရ် ဆရာတော်များသည် ၁၃၄၃ ခု သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁၁, ၁၂, ၁၃, ၁၄)ရက်များနှင့် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း (၁, ၂)ရက် (၁၉၈၁ ခု အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက်မှ ၂၉ ရက်)၊ ခြောက်ရက်တိုင်တိုင် စောဒက စုဒိတကပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရှေ့မှောက်မှာ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဖတ်ကြား ချမှတ်ခဲ့ကြသည်။
ယင်းရက်များတွင် မြို့နယ်စုံမှ လာရောက် နားထောင်ကြသော ရဟန်း ရှင် လူ ပရိတ်သတ်တို့မှာ ဘုရားပွဲတော်ကြီးပမာ များပြားလှ၏။
လူသေလူဖြစ်ဝါဒသည် ပိဋကစာပေ၊ သိပ္ပံပညာရပ်၊ အနောက်တိုင်းအယူအဆ၊ ဘာသန္တရစာပေ စသည်တို့ဖြင့် ဆယ့်နှစ်မျိုးဂျင်းသုတ်ကဲ့သို့ ပေါင်းစပ် စုစည်းထားသောကြောင့် ယင်းလူသေလူဖြစ်ဝိနိစ္ဆယသည် အခြားသော ကျောက်သင်္ဘော၊ ကြောင်ပန်း၊ ကျောက်ပုံတောရ စသည့် ဝိနိစ္ဆယပေါင်း မြောက်မြားစွာတို့ထက် ကျယ်ဝန်း နက်နဲပြီး အခက်ခဲဆုံး ဖြစ်၏။
ပါဠိပိဋကစာပေ၊ မြန်မာစာပေ သက်သက် ကျွမ်းကျင်ရုံမျှဖြင့် လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန် မလွယ်ကူပါ။
ထို့ကြောင့် လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို ပထမဆုံး မဆုံးဖြတ်ဘဲ ကျောက်သင်္ဘောဝါဒကို ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် ဒုတိယမြောက်မှ လူသေလူဖြစ်ဝါဒကို ဝိနိစ္ဆယချခဲ့ကြရသည်။
ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီးများသည် သာသနာလောက၌ အထက်တန်းကျသော သကျသီဟ၊ စေတိယင်္ဂဏ၊ အစိုးရဓမ္မာစရိယ၊ ပါဠိပါရဂူဘွဲ့များ ရရှိပြီး စာသင်သား ရာကျော်ရှိသည့် စာသင်တိုက်ကြီးများ၏ ဦးစီး ပဓာနနာယကချုပ် ဆရာတော်ကြီးများ ဖြစ်ကြ၏။
၎င်းငါးပါးတွင် မြောင်းမြဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဉာနိကသည် ပါဠိပိဋကတင်မက အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ၊ ဘင်္ဂါလီ၊ နာဂရီ စသည့် ဘာသန္တရစာပေများပါ ကျွမ်းကျင် တတ်မြောက်၏။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ နယူးဒေလီယူနီဗာစီတီမှ သက္ကတဂုဏ်ထူးဖြင့် ဘီအေဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့၏။
မြောင်းမြဆရာတော်ဘုရား၏ အရည်အချင်းကို သိမြင်သဖြင့် နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယက ဆရာတော်ကြီးများက ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့တွင် ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် သာသနာရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ဝေသော စာမျက်နှာ တစ်ထောင်ကျော်ရှိ လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယကျမ်းစာအုပ်တွင် ဆရာတော်ဘုရား၏ ဓာတ်ပုံအောက်၌ “ဘာသန္တရ စွယ်စုံ တတ်ကျွမ်းတော်မူသော မြောင်းမြမြို့ ပဇ္ဇောတာရုံဆရာတော် ဦးဉာနိက သုံးသပ်ချက်ကို ဖတ်ကြားနေပုံ”ဟု ဘာသန္တရ စွယ်စုံ တတ်ကျွမ်းတော်မူပုံကို အထူးပြု၍ ဂုဏ်ပြု ရေးသားခဲ့သည်။
မြောင်းမြဆရာတော်ဘုရားသည် စုဒိတကပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ သိပ္ပံပညာရပ်၊ အနောက်တိုင်း အယူအဆ၊ ဘာသန္တရစာပေနှင့် စပ်ဆိုင်သော ချေပလွှာများကို တစ်ပါးတည်း ဒိုင်ခံပြီး ဖြေရှင်းခဲ့၏။
လူသေလူဖြစ် ဝိနိစ္ဆယဆိုသော်လည်း သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့ချုပ်က ထုတ်ဝေသော စာစောင်များနှင့် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒဆိုင်ရာ စာစောင်များ၏ ဝါဒရေးရာတို့ကိုပါ ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရသောကြောင့် ကျမ်းစာအုပ်ကို နာမည်တပ်သောအခါ “လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယ”ဟု အမည်ပေးခဲ့၏။
ထို့ပြင် အခြားသော ကျောက်သင်္ဘောဝိနိစ္ဆယ၊ ကျောက်ပုံတောရဝိနိစ္ဆယ စသော ဝိနိစ္ဆယကျမ်းများကိုမူ ထေရဝါဒ စွယ်စုံကျမ်းဟု အမည်မတပ်ဘဲ ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် နိကာယ်ငါးရပ် ပိဋတ်သုံးသွယ်မှ ကျယ်ပြန့်သော ဗုဒ္ဓဝါဒ ဓမ္မဥဿုံ စုံစုံလင်လင် ရှိလှသဖြင့် လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယကျမ်းကိုသာ ၎င်းကျမ်းစာအမည်၏ အောက်တွင် “ထေရဝါဒစွယ်စုံကျမ်း”ဟု အထူးပြု၍ ကျမ်းစာနာမည်ကို မှည့်ခေါ်ခဲ့ကြ၏။
ယင်းဝိနိစ္ဆယတွင် စောဒကဆရာတော်လေးပါးက စောဒနာလွှာ ၂၁ ချက် တင်သော်လည်း စုဒိတကဆရာတော် ဦှးဆန္ဒာဓိက၊ နတ်မှီတောရကျောင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့က စောဒနာလွှာ အမှတ် (၅, ၁၁, ၁၄, ၂၁)ကိုသာ ဖြေရှင်း၍ သခင်မြတ်ဆိုင်က စောဒနာလွှာ အမှတ် (၈, ၂၀, ၂၁)တို့ကို မဖြေရှင်းဘဲ ကျန်သည့် စောဒနာလွှာ ၁၈ ချက်ကိုသာ ဖြေရှင်းသည်။
ဦးခင်ဟန်က သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့ချုပ်ကိုယ်စား စောဒနာလွှာ အမှတ် (၂, ၄, ၇, ၁၁, ၁၂, ၁၅, ၁၈, ၂၀, ၂၁)တို့ကို မဖြေရှင်းဘဲ ကျန်သည့် စောဒနာလွှာ (၁၁)ချက်ကိုသာ ဖြေရှင်းသည်။
လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယကျမ်းသည် စာမျက်နှာပေါင်း (၁၁၁၂)ရှိရာ စောဒကများက တင်သွင်းသော စောဒနာလွှာ (၂၁)ချက်မှာ စာမျက်နှာပေါင်း (၂၁၅)မျှ ရှိ၍ စုဒိတကပုဂ္ဂိုလ် သုံးဦးက သောဓနာလွှာ မျိုးစုံကို စာမျက်နှာပေါင်း (၁၄၈)မျှ တင်သွင်းကြသည်။
ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီးများက စာမျက်နှာ (၇၄၉)ကျော်ကို ရေးသားပြီး သုံးသပ် ဖြေရှင်းတော်မူခဲ့ကြသည်။
လူသေလူဖြစ်ဝါဒသည် အဓမ္မဝါဒသာ ဖြစ်
ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်ကြီးများသည် ၁၃၄၃ ခု သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက် (၂၄-အောက်တိုဘာ-၁၉၈၁)နေ့မှ တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၂ ရက် (၂၉-အောက်တိုဘာ-၁၉၈၁)နေ့အထိ ခြောက်ရက်တိုင်တိုင် စောဒက စုဒိတက ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ရှေ့မှောက်တွင် စောဒနာ သောဓနာလွှာများကို အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ် စစ်ဆေးခဲ့ကြ၏။
ဆရာတော်ကြီးများ၏ နောက်ဆုံး သုံးသပ်ချက်ကို အမြွက်မျှ ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
“ယင်း လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ (လူသေလူဖြစ် ဦးဥက္ကဋ္ဌဝါဒ၊ ၎င်း၏ နောက်လိုက်ဖြစ်သော သခင်မြတ်ဆိုင်၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသီ စသူတို့၏ ဝါဒ)သည် ထေရဝါဒ ပိဋကတ်တော်လာ သာသနဓမ္မ အာဂမယုတ္တိများနှင့်လည်းကောင်း၊ လေးနက် ကျယ်ပြန့်သော သဘာဝယုတ္တိများနှင့်လည်းကောင်း မလျော်ကန်အောင် ဖောက်ပြန် ယွင်းကွက် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော အဓမ္မဝါဒသာ ဖြစ်သည်ဟု နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂) ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်တော်မူကြသည်။
နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂) ရုံးတော်သို့ သက်သေခံ တင်ပြထားသော လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း စာစောင် တိတ်ခွေများနှင့်တကွ ရုံးတော်သို့ သက်သေခံပစ္စည်းအဖြစ် ရောက်မလာသော ထိုဝါဒဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း စာစောင် တိတ်ခွေနှင့် ကျောက်စာ စသည်၌ ပါရှိသော ရေးသားချက်များသည်လည်း ထေရဝါဒ ပိဋကတ်တော်လာ သာသနဓမ္မနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်များ ဖြစ်၍ ထိုစာအုပ်စာတမ်း စာစောင် တိတ်ခွေ ကျောက်စာ စသည်တို့သည် အဓမ္မဝါဒကို ဖော်ပြရာဖြစ်သောကြောင့် အဓမ္မပစ္စည်းများ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂) ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်တော်မူကြသည်။
ထိုလူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ (လူသေလူဖြစ် ဦးဥက္ကဋ္ဌဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသီ စသူတို့၏ ဝါဒ စသည်)ကို ရေးသား ဟောပြော ဖြန့်ဝေကြသော သင်္ကန်းဝတ်နှင့် လူဝတ်ကြောင်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ထိုလူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒကို လိုက်နာ၍ ပြုလုပ်ကြသော သင်္ကန်းဝတ်နှင့် လူဝတ်ကြောင်တို့သည်လည်းကောင်း၊ ထိုလူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒကို လိုလား နှစ်သက်စွာ ထောက်ခံ အားပေးကြသူ သင်္ကန်းဝတ်နှင့် လူဝတ်ကြောင်တို့သည်လည်းကောင်း အဓမ္မဝါဒီများသာ ဖြစ်ကြကုန်၏” ဟူ၍ နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂) ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များ အားလုံးက တညီတညွတ်တည်း ဆုံးဖြတ်တော်မူကြသည်။
အဓမ္မဝါဒ စွန့်လွှတ်ကြောင်း ပဋိညာဉ်ပြု
နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂)က လူသေလူဖြစ် ဦးဥက္ကဋ္ဌဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနဝါဒနှင့် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒတို့ကို အဓမ္မဝါဒဟူ၍ ဝိနိစ္ဆယ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ရာ ၎င်းဝါဒများကို မစိစစ်မီက ပဋိညာဉ်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်း စုဒိတကဖြစ်သော ဆရာတော်ဦးဇဝန ဦးဆောင်သော သံဃာတော် လေးပါးနှင့် သခင်မြတ်ဆိုင် ဦးဆောင်သော ပုဂ္ဂိုလ် ၉ ဦးတို့က အဓမ္မဝါဒများကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း၊ နောင် အနာဂတ်ကာလ၌လည်း ယင်းဝါဒများကို ဟောပြောခြင်း၊ ရေးသားခြင်း စသည့် အမှုများကို ကိုယ်တိုင်လည်း မပြုလုပ်၊ အခြားသူများအားလည်း ပြုလုပ်စေမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ မိမိတို့ ဝါဒဆိုင်ရာ စာအုပ်စာတမ်း စသည်တို့ကိုပါ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ အပ်နှံခြင်းများကို ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းအဓမ္မဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ သုံးစွဲခဲ့သော အသင်းအဖွဲ့ အမည်များ၊ အသင်းအဖွဲ့ စသည်တို့ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းမည် ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် သံဃမဟာနာယကအဖွဲ့၏ ရှေ့မှောက်၌ အသီးသီး ပဋိညာဉ် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။
နိုင်ငံတော် အစိုးရက အာဏာစက်ဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်
နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနည်းဓိုရ်အဖွဲ့ အမှတ် (၂) ဝိနည်းဓိုရ်ဆရာတော်များက ၁၉၈၁ ခု အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့၏ ဝါဒနှင့် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒတို့ကို အဓမ္မဝါဒဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပြီးနောက် နိုင်ငံတော်အစိုးရက ၁၃၄၃ ခုနှစ် တန်ဆောင်မုန်းလဆန်း ၃ ရက် (၁၉၈၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်) နေ့စွဲဖြင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၂/၈၁ ကို (ထိုစဉ်က) ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်စိန်လွင်က လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ဝိနည်းဓမ္မကံ အဓိကရုဏ်းမှုခင်းများ ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်ရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၃ အရလည်းကောင်း၊ ၁၉၆၂ ခုနှစ် ပုံနှိပ်သူများနှင့် ထုတ်ဝေသူများ မှတ်ပုံတင် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ အရလည်းကောင်း၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ အရလည်းကောင်း ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့၏ ဝါဒ၊ သို့မဟုတ် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒကို ဟောပြောခြင်း၊ သင်ကြား ပို့ချခြင်း၊ စာအုပ်အဖြစ် ရိုပ်နှိပ် ဖြန့်ချိခြင်း၊ ကူးယူ ဖြန့်ချိခြင်းနှင့် အသံဖမ်းတိတ်ခွေများဖြင့် အသံသွင်းခြင်း၊ ဖြန့်ချိခြင်းတို့ကို တားမြစ် ပိတ်ပင်ပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ် အမျိုးသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ကာကွယ်သည့် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၅ အရ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့၏ ဝါဒ၊ သို့မဟုတ် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒ ပြန့်ပွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အသင်း အဖွဲ့အစည်းများကို ဖျက်သိမ်းလိုက်သည်ဟု အာဏာစက်ဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
ဘာကြောင့် ဝိနိစ္ဆယရုံးသို့ ရောက်လာကြပါသလဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိနေသော ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူဝါဒီများနှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒီများက နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးသို့ ရောက်မလာကြဘဲ ရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၏ လူသေလူဖြစ်ဝါဒ၊ သမ္မာဒိဋ္ဌိသုတေသနအဖွဲ့၏ ဝါဒနှင့် ရွှေအဘိဓမ္မာဝါဒကို ယုံကြည် လက်ခံကြသော ဦးဆန္ဒာဓိက၊ သခင်မြတ်ဆိုင် စသည့် စုဒိတက (တရားခံ)များသည် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဖက်ဖြစ်သော လူသေလူဖြစ်ဝါဒနှင့် ရုပ်ကြမ်းဝါဒများကို လက်ခံ ယုံကြည်ရုံမျှဖြင့် အဘယ်ကြောင့် နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးသို့ ရောက်လာကြပါသနည်း?
ယင်း စုဒိတက (တရားခံ)များသည် မိမိတို့ ယုံကြည် လက်ခံထားသော လူသေလူဖြစ်ဝါဒနှင့် ရုပ်ဝါဒအတွက် လမ်းရှင်းပေးလိုသည့်အနေဖြင့် ဘီစီ ၆၂၃ ခုနှစ်ခန့်က စတင် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော် ကာလတိုင်တိုင် အများ ပြည်သူ ရဟန်း ရှင်လူ သန်းပေါင်းများစွာတို့၏ ကိုးကွယ် အားထားရာဖြစ်သော ပိဋကကျမ်းဂန်များ၊ ပိဋကဆောင် ရဟန်းသံဃာများကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစား အားထုတ်ခြင်း၊ သူတပါးတို့၏ ယုံကြည် ကိုးစားချက်ကို ထိပါး စော်ကားခြင်းတို့ကြောင့် နိုင်ငံတော် သီးခြား ဝိနိစ္ဆယခုံရုံးသို့ ရောက်လာကြရသည်။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘာသန္တရဆေက မြောင်းမြဆရာတော်ဘုရားကြီး
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် ရှင်ဥက္ကဋ္ဌက ကိုးကား၍ ရေးသားထားသော အင်္ဂလိပ်၊ ဟိန္ဒီ၊ သက္ကတ စာပေများကို ကျမ်းစာ အထောက်အထား ပြလျက် တစ်ပိုဒ်ချင်း ဖြေရှင်း သုံးသပ်ပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့၏။
ဘာသန္တရစာပေ များစွာပါရှိသည့် စောဒနာ သောဓနာလွှာတို့ကို တာဝန်ယူ၍ ဆုံးဖြတ်ရာတွင် ပညာရှင်များက လေးစားပြီး လက်ဖျားခါရလောက်အောင် ကျွမ်းကျင် ပိုင်နိုင်လှ၏။
စုဒိတကပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ်တိုင် ဆရာတော်ဘုရားက မေးမြန်းသော အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာတို့ကို လုံးဝ မကြားဖူး၊ မဖတ်ဖူးကြောင်းကို ဝန်ခံစကား လျှောက်ထားခဲ့ကြရ၏။
ဆရာတော်ဘုရားကဲ့သို့ ဘာသန္တရစွယ်စုံ မကျွမ်းကျင် မတတ်မြောက်လျှင် ဘာသန္တရစာပေများနှင့် စပ်ဆိုင်သော ၎င်းစောဒနာ သောဓနာလွှာတို့ကို လုံးဝ ဖြေရှင်း ဆုံးဖြတ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
နိုင်ငံတော်အစိုးရကလည်း အာဏာစက်ဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် ပိုမို ထိရောက် အောင်မြင်ခဲ့၏။
လူသေလူဖြစ် ဝါဒါနုဝါဒ ဝိနိစ္ဆယကြီး အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးမှု၌ ကျေးဇူးရှင် မြောင်းမြဆရာတော်ဘုရားကြီး ဘဒ္ဒန္တဉာနိက၏ စွမ်းအားသည် အံ့မခန်း ကြီးမားလှသည်ဖြစ်ရာ ၁၉၉၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၈ ရက်နေ့က ဘဝနတ်ထံ စံလွန်တော်မူခဲ့သော အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ကျေးဇူးတော်ရင် မြောင်းမြ ပဇ္ဇောတာရုံ ဆရာအရှင်၏ ဘာသန္တရဆေက ပဉ္စနိကာယ ပိဋကတ္တယပါရဂူ ဘာသန္တရဝိဒူ ဖြစ်ပုံကို ဖော်ပြရာဖြစ်သော ဤ“လူသေလူဖြစ် ဝိနိစ္ဆယကျမ်းကြီး”ဆောင်းပါးဖြင့် ဆရာမြတ် ထေရ်သခင် ကျေးဇူးရှင်အား ဦးနှိမ်ရိုကျိုး လက်စုံမိုးလျက် အကြိမ်ကြိမ် ရှိခိုးကော်ရော် ပူဇော်အပ်ပါသည်။
‘သရဏဂမန’ဆိုတာ အမှန် နားလည်ရမယ်။
‘သရဏ’ဆိုတာ ကိုးကွယ်ရာ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဘေးရန်အပေါင်းကို ဖျက်ဆီးပေးတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဖြစ်ဖြစ်၊ တရားကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အဲဒါကို သရဏလို့ ခေါ်တယ်။
‘သရဏဂမန’ဆိုတာက အဲဒီ ဘေးရန်အပေါင်းကို ဖျက်ဆီးပေးတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဒါမှမဟုတ် တရားကို ကိုးကွယ်တာကို သရဏဂမနလို့ ခေါ်တယ်။ ဒါကို ဆရာအဖြစ်နဲ့ အသိအမှတ်ပြုတာမျိုးပေါ့။ အဲဒါဟာ သရဏဂမနပဲ။
မိမိကိုယ်ကို စွန့်လှူပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း သရဏဂုံယူပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။
အရှင်ဘုရားကိုသာ ကိုးကွယ်ရာရှိပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း သရဏဂုံယူပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။
ဒါမှမဟုတ် အရှင်ဘုရားကို ဆရာအဖြစ်နဲ့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း သရဏဂုံ တည်တာပဲ။
ဘုရား တရား သံဃာမှတစ်ပါး ရှိခိုးမှု၊ ကိုးကွယ်မှု မပြုလုပ်တော့ပါဘူးလို့ ပြောလိုက်ရင်လည်း ဖြစ်တာပဲ။
သရဏဂုံယူတော့ ဘာအကျိုးရှိသလဲလို့ မေးရင် လောကုတ္တရာသရဏဂုံ တည်လျှင် မဂ်ဖိုလ်ရတဲ့သူဟာ ဒုက္ခခပ်သိမ်း ကင်းငြိမ်းကာ ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီးတော့ ဘဝဇာတ်သိမ်းသွားရတယ်ဆိုတဲ့ အကျိုး ရှိတယ်။
လောကီသရဏဂုံကျတော့ ကောင်းရာမွန်ရာ ရောက်တာ။ ဒါဟာ လောကီသရဏဂုံရဲ့ အကျိုးပဲ။ ဖြစ်တဲ့ဘဝမှာ စည်းစိမ်ချမ်းသာ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုမျိုး စသည်တို့ဟာ လောကီသရဏဂုံရဲ့ အကျိုးပဲ။
အဲဒီမှာ ဘုရားဟောထားတဲ့ ဂါထာတစ်ပုဒ် ရှိတယ်။
ယေကေစိ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂတာသေ၊
အဲဒီ ဂါထာကို တိုက်ရိုက် အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင် “မြတ်စွာဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အပါယ်ဘုံသို့ မလား မရောက်ကြဘူး”တဲ့။ သေသည့်တိုင်အောင် သရဏဂုံမြဲနေရင်ပေါ့။
ဒီဂါထာအရ သရဏဂုံ တည်မြဲခြင်းရဲ့ အကျိုးက အပါယ်မကျဘူး။ နတ်ပြည်ရောက်မယ်။
အဲဒီ သရဏဂုံဟာ မပျက်ပေမယ့် သရဏဂုံကို ခံယူတဲ့အခါ နားမလည်ရင်၊ နောက် … သံသယဖြစ်နေရင် စသည်ဖြင့် သရဏဂုံ ညစ်နွမ်းတယ်။
ဘုရားဟောထားတာ တစ်ခုရှိတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရမ်းမယုံနဲ့။ ကိုယ်တိုင် တွေ့ရှိ နားလည်ပြီးတော့မှ ဟုတ်သည် မဟုတ်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ပြီး ကောင်းတာဆိုရင် လိုက်နာ ကျင့်သုံးမယ်။ မကောင်းတဲ့ဟာဆိုရင် ပယ်ရမယ်လို့။
အဲဒီတော့ တစ်ခါတလေကျရင် တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ တို့ကတော့ လက်မလေး ထောင်ထောင်ပြီး ပြောကြတယ်။
“ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ Blind faith မျက်ကန်းယုံကြည်မှုဆိုတာ မရှိဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နားလည်ပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိမှ။ မှန်တော့ မှန်တယ်။
ဒါပေမယ်လို့ တစ်ခါတလေကျတော့ Blind ဘလိုင်း မဟုတ်ဘူး ထင်တယ်။ ဒါပေမယ်လို့ Faith ဘုရားကို ယုံကြည်ပြီးတော့ … သူက … အမှန်လို့ ယူရတာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
မင်းတို့ အပြောလွန်မှာ စိုးလို့ ပြောတာ။ ကိုယ်က အပြောလွန်သွားတော့ သူများက ဝင်ပြီး ထိုးလိုက်ရင် မဖြေနိုင် ဖြစ်သွားမယ်။”
အဲဒီတော့ ကံ ကံရဲ့အကျိုးတဲ့။ ဒါလည်း တို့ဘုရားကို ယုံပြီးတော့ ယုံနေရတာ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိလား၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မြင်လား၊ အကုသိုလ်ကံပြုလို့ အကုသိုလ်အကျိုး ရတယ်၊ ကုသိုလ်ကံပြုလို့ ကုသိုလ်အကျိုး ရတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် မမြင်ဘူး၊ မသိဘူး မဟုတ်လား။
ဒါပေမယ့် ဘုရားဟောထားတဲ့ ကျမ်းဂန်တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး တို့က “ဘုရားဆိုတာ မဟုတ်မမှန်တဲ့ စကား ဘယ်တော့မှ မပြောဘူး”လို့ မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာ ယုံကြည်ပြီးတော့ တို့တတွေကလည်း ဒါကို အမှန်လို့ ယူဆပြီးတော့ သူများလက်ထဲ တစ်ဆင့်ရောက်ဖို့ ဟောပြောနေတာ ဟုတ်တယ် … မဟုတ်လား။
ကောင်းတာ လုပ်ရင် ကောင်းတဲ့ အကျိုး ရတယ်။ မကောင်းတာ လုပ်ရင် မကောင်းတဲ့ အကျိုး ရတယ်။ အတိအကျတော့ မြင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လောကမှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်ပျက်နေတယ်။ ဒီလောကီအလို Thinking တွေးတော ကြံဆခြင်း အနေနဲ့ သွားတာ။ Intuitive knowledge အနေနဲ့ မသိဘူး။
ထို့အတူပဲ နောက်ဘဝ ရှိတယ်ဆိုတာလည်းပဲ ဘုရားဟောတာကို လေးစား ယုံကြည်ပြီး တို့က ပြောနေတာ။
နောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာ တကယ်မြင်တဲ့လူ … တို့ကျောင်းမှာတောင် ရှိတယ်။ ဆရာတော် ဦးသောဘဏဆိုတာ … သူရဲ့ နောက်ဘဝကို မှတ်မိနေတယ်။ အဲဒီလို ဘုန်းကြီးမျိုးကျတော့ ဘယ်လိုမှ ငြင်းလို့ မရဘူး။
ဒါပေမယ့် တချို့ လူဝင်စားတွေကျပြန်တော့ များသောအားဖြင့် နောက်တုန်းက ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မသိကြဘူး။ ရှေ့ဘဝဆိုတာလည်း မသိကြဘူး။
ဒါပေမယ့် မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတယ်လို့ လေးစား ယုံကြည်ပြီးတော့ “မြတ်စွာဘုရားက ဘယ်တော့မှ မဟုတ် မမှန်တဲ့ စကားကို မပြောဘူး။ မှန်ကန်တဲ့ စကားကိုပဲ ပြောတာ”လို့ ယုံကြည်ကြတာ။ အဲဒါတွေကျတော့ We have to take on faith.
တဖက်ကလည်း အမြဲတမ်း ဘုရားဟောတာပဲလို့ လက်ခံပြီး ယုံနေမလား ဆိုတော့ … ကိုယ်ကိုယ်တိုင် နားလည်အောင် ဘုရားက နည်းပေးထားတယ်။ အဘိညာဉ် (ဈာန်) ရအောင် အားထုတ်ရင် နောက်ဘဝတွေ မြင်နိုင်တယ်။ သတ္တဝါတွေ တစ်ဘဝက သေပြီး တစ်ဘဝ ဖြစ်နေတာလည်း မြင်မယ်။ ဒါဟာ ဘုရားမှ မြင်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သာဝကတွေလည်း မြင်နိုင်တယ်။ အဲဒီလို အဘိညာဉ်ရအောင် အားထုတ်ပြီးတော့ ထားမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိသွားပြီ။
ဥပမာ - Atom အကြောင်း မင်းတို့ … ငါ့ကို ပြောပြတတ်လား။ မင်းတို့ … ပြောပြတတ်တယ် မဟုတ်လား။ ပရိုတွန်တို့ နျူထရွန်တို့ အီလက်ထရွန်တွေ ပတ်သွားနေတာပဲလို့ သူတို့ ပြောနေတာ မဟုတ်လား။ အဲဒါကိုကော တကယ်သိလို့ ပြောနေတာလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ စာအုပ်ထဲ ဖတ်ပြီး သိထားလို့ ပြောနေတာပါ။ အဲဒီလိုပေါ့။
ဘုရားကို အားကိုးပြီး ယုံရတာ
မြတ်စွာဘုရားကို စိတ်ချပြီး ယုံကြည်ရတဲ့ ကိစ္စတွေလည်း တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ရှိတယ်။
ဒါပေမယ်လို့ ဘာပဲပြောပြော တချို့ဟာတွေမှာကျတော့ ဟုတ်တယ်။ ‘ကိလေသာကင်းတယ်’ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဆိုပါတော့။
ဒါကို ပုဏ္ဏားတစ်ယောက်က မေးလျှောက်တယ်။
သန္ဒိဋ္ဌိက = မျက်မှောက် တွေ့မြင်နိုင်တဲ့ အကျိုးဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲ? တဲ့။
ဥပမာ စဉ်းစားကြည့်စမ်းပါ။ တစ်ချိန်မှာ မင်း … ကုသိုလ်စိတ်တွေ ဖြစ်နေရင် အဲဒီအချိန်မှာ အကုသိုလ်စိတ်တွေ ရှိလားလို့ မေးရင် ဘယ်လို ဖြေမလဲ။ အကုသိုလ်စိတ်တွေ မရှိဘူး မဟုတ်လား။
ဒါဟာ ကိုယ်တွေ့တရားပဲ။ အဲဒါမျိုးကျတော့ သူများ သွားပြီး ယုံစရာ မလိုဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိနိုင်တယ်။
ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ်ပြန်ပြီး စဉ်းစားကြည့်လိုက်။ ငါ့ရဲ့စိတ်ဟာ ကောင်းတဲ့စိတ် ဖြစ်နေသလား။ မကောင်းတဲ့စိတ် ဖြစ်နေတာလား။
ကောင်းတဲ့စိတ် ဖြစ်နေရင် ကုသိုလ်ဖြစ်နေတယ်။ အကုသိုလ် မဖြစ်ဘူးပေါ့။
အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေရင် ကုသိုလ်စိတ် သူ့မှာ မရှိဘူး။ မဖြစ်ဘူးပေါ့။
ဒါတွေက ကိုယ်တိုင် သိနိုင်တာ။ သူများကို မေးစရာ မလိုဘူး။
ဒါကြောင့် တချို့ဟာတွေကျတော့ လက်လှမ်းမမီသေးလို့ပေါ့နော်။ သူတို့တတွေ ရေးကြတဲ့ ပြောကြတဲ့ အီလက်ထရွန်နစ်စကုပ် ခေါ်လား … အဲဒီဟာတွေနဲ့ မလုပ်နိုင်သေးလို့ သူတို့ ရေးထားတာနဲ့ပဲ တို့က ကျေနပ်ပြီးတော့ ယုံနေရတယ်။ တစ်နေ့ သူတို့လိုပဲ တတ်မြောက်ခဲ့လို့ လုပ်နိုင်ခဲ့ရင် အဲဒီအခါကျတော့ တို့လည်း သူတို့လိုပဲ လုပ်နိုင်မှာပေါ့။
အဲဒီလို အဘိညာဉ်ဆိုတာ ရအောင် မလုပ်နိုင်သေးလို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောထားတာတွေပဲ တို့တတွေက ယုံနေတယ်။ တို့ကိုယ်တိုင် တကယ် အားထုတ်လို့ အဘိညာဉ်တွေရရင်တော့ ဘယ်သူပြောတာကိုမှ ယုံစရာ မလိုတော့ဘူး။ ကိုယ်တိုင် မြင်သွားပြီ၊ ဟုတ်ပြီလား။
ဒါကြောင့် ရှေးတုန်းက … မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်က ရဟန္တာတွေကို ယုံကြည်မှု မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလို့ သုံးထားတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံး ရှိတယ်။ ရုတ်တရက် အမှတ်တမဲ့ဆိုရင်တော့ အလွန်ရင့်သီးတဲ့ စကားလုံး တစ်လုံးပေါ့။ သဒ္ဓါ မရှိဘူး။ ယုံကြည်မှု မရှိဘူး။ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ သဒ္ဓါတရား မရှိဘူးပေါ့။
ဆိုလိုတာကတော့ သူများကို ယုံကြည်နေတာမျိုး မရှိဘူး။ သူတစ်ပါး အပြောနဲ့ ယုံကြည်မှု မရှိဘူး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် တရားသိပြီး နိဗ္ဗာန်ကို ကိုယ်တိုင် မြင်ထားလို့ပဲ။ သူများ စကားအရ ယုံစရာ မလိုတော့ဘူး။ သူကိုယ်တိုင် မြင်သွားပြီ။
ဒါကြောင့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကို တစ်ခါတလေ “အသဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်” – “ယုံကြည်မှု သဒ္ဓါတရား မရှိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်”လို့ ဘာသာပြန်ပြီး ခေါ်ကြတယ်။
အမှန်ကတော့ သူတစ်ပါးရဲ့ ယုံကြည်မှုနောက်ကို လိုက်ပြီး ယုံကြည်ရတာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သိပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝ ရှိနေတာကြောင့် သူတစ်ပါးကို အားကိုးစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။
အကြောင်းအကျိုး အကောင်းအဆိုးမှ ကင်းသူ
မြတ်စွာဘုရားရှင်က “ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့မည်သည် ကုသိုလ် အကုသိုလ် မရှိကြသော်လည်း ပုထုဇဉ်လောကသားများကဲ့သို့ပင် ရတနာသုံးပါး၌ အလွန် ရိုသေ လေးစားမှု ကြီးမားတော်မူကြသည်”လို့ မဇ္ဈိမပဏ္ဏာသအဋ္ဌကထာမှာ ဆိုထားတယ်။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များ ဒါန စသော ကောင်းမှု ကုသိုလ် ပြုကြသည်။ သို့သော် ဆန္ဒ ရာဂ ကင်းသည်၏ အဖြစ်ကြောင့် ရဟန္တာများ ပြုလုပ်သော ကောင်းမှုဒါန ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့သည် ကုသိုလ်ဟု မခေါ်ဆိုထိုက်ဘဲ ကြိယာဟု ခေါ်ဆိုထိုက်ကြောင်း ဥပရိပဏ္ဏာသအဋ္ဌကထာမှာ ပြဆိုထားပါတယ်။ အကြောင်းရင်းမှာ နောက်ထပ် ဘဝသစ် မရှိကြတော့လို့ပါပဲ။
ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင် အကုသိုလ် အပြုအမူမျိုး လုံးဝ မရှိတော့သဖြင့် အကုသိုလ်ကံ မရှိကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ ထို့အတူ ကုသိုလ်ပြုကြသော်လည်း ကုသိုလ်မဖြစ်တော့ပေ။ ပြုခြင်း ကြိယာမျှသာ ဖြစ်ပါသည်။
သို့သော် ကုသိုလ်ကောင်းမှုကား ပြုကြပါသည်။
ကျေးဇူးရှင် မဟာစည်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက သီလဝန္တ သုတဝန္တသုတ္တန်ဒေသနာမှာ ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်များ ကုသိုလ်မရှိဘူးဆိုတာ ကုသိုလ်အမှုကို ပြုကြပေမယ့် အဝိဇ္ဇာ မရှိတဲ့အတွက် အကျိုးပေးတဲ့ ကုသိုလ်ကံ မဖြစ်ဘဲ အကျိုးမပေးတဲ့ ကြိယာမျှသာ ဖြစ်တယ်။
ဒါပေမယ်လို့ ကောင်းမှုအမျိုးမျိုး ပြုတယ်။ ဘုရားကို ရိုသေတယ်။ တရားဟောတယ်။ တရားနာတယ်။ ဒုက္ခရောက်နေသူတွေကို ကယ်တယ်လို့ ဟောထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့ သရဏဂုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်စရာလေးတွေ ဒီလောက်ဆိုရင် အတော်လေး ပြည့်စုံသွားပါပြီ။
Posted by LokaChantha at 3:16 PM 1 comment:
သရဏဂုံဟာ အကျဉ်းအားဖြင့် နှစ်မျိုးရှိတယ်။
လောကုတ္တရာသရဏဂုံ၊ လောကီသရဏဂုံဆိုပြီး နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
လောကုတ္တရာသရဏဂုံဆိုတာက တရားထူးရတယ်၊ အရိယာဖြစ်တယ်၊ သောတာပန်, သကဒါဂါမ်, အနာဂါမ်, ရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးရှိတယ်။ အဲဒီ တရားထူးရတဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သန္တာန်မှာ စိတ်တစ်ခု ဖြစ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ကို မဂ်စိတ်လို့ ခေါ်တယ်။ မဂ်ရယ် ဖိုလ်ရယ်လို့ ရှိတယ်။ အဲဒါ တရားထူးရတဲ့ အချိန်မှာ ဖြစ်တဲ့ စိတ်၊ ဝိပဿနာရှုမှတ်တဲ့အခါ ဉာဏ်တွေ အဆင့်ဆင့် မြင့်တက်ပြီး အဲဒီ တရားထူး ပေါ်လာတာပေါ့လေ။
အဲဒီ တရားထူး ရတဲ့အချိန် အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ သန္တာန်မှာ စိတ်တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။
ဘယ်တုန်းကမှ မဖြစ်ဖူးသေးတဲ့ စိတ်တစ်မျိုး ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ စိတ်ကို မဂ်စိတ်လို့ ခေါ်တယ်။ အဲဒီ မဂ်စိတ်က နိဗ္ဗာန်ကို တိုက်ရိုက် အာရုံပြုတယ်။ အဲဒီ မဂ်စိတ်က ကိလေသာတွေကို ပယ်နိုင်တယ်။ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။ မဂ်စိတ်က နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံ ပြုပြီး၊ ကိလေသာတွေကို ပယ်တယ်။
အဲဒီ မဂ်စိတ် အခိုက်အတန့်မှာ ဖြစ်တဲ့ သရဏဂုံကို လောကုတ္တရာသရဏဂုံလို့ ခေါ်တယ်။
ဒါက အနည်းဆုံး သောတာပန်ဖြစ်မှ လောကုတ္တရာသရဏဂုံကို ရမယ်။
အဲဒီ မဂ်အခိုက်အတန့်မှာ သစ္စာကို မြင်ပြီးတော့ ကိလေသာကို ပယ်တဲ့ စိတ် ဖြစ်တယ်။ အဲဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ အဲဒီစိတ်နဲ့အတူတူ ဖြစ်တဲ့ ကိုးကွယ်မှု၊ ဘုရားအပေါ် ယုံကြည်မှု၊ အဲဒါကို လောကုတ္တရာသရဏဂုံလို့ ခေါ်တယ်။
ကိလေသာကို ပယ်တယ်ဆိုတာ ရိုးရိုး ကုသိုလ်နဲ့လည်း ကိလေသာကို ပယ်နိုင်တာပဲ။
ဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါ ကိလေသာ မရှိဘူး။ ဒါလဲ ကိလေသာ ပယ်တာပဲ။
ဝိပဿနာနဲ့လည်းပဲ ကိလေသာကို ပယ်နိုင်တာပဲ။ တရားထိုင်တဲ့အခါ ကိလေသာ မရှိဘူး။
အဲဒါ ကိလေသာပယ်တယ် ခေါ်တယ်။
ဒါကတော့ ခေတ္တ ကိလေသာ ပယ်ထားတာ။
မဂ်နဲ့ပယ်တာကတော့ အပြီးသတ် ပယ်တယ်။
မဂ်နဲ့ပယ်ပြီး ကိလေသာက အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်သန္တာန်မှာ ဘယ်တော့မှ ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။
မဂ်စိတ်နဲ့ ကိလေသာပယ်တယ်ဆိုတာ နောက် ဘယ်တော့မှ ပြန်မဖြစ်နိုင်အောင် ပယ်တာ။
အဲဒါ လောကုတ္တရာသရဏဂုံလို့ ခေါ်တယ်။
လောကီသရဏဂုံကတော့ ခုနက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့လေ။ ပုထုဇဉ်တွေရဲ့ သန္တာန်မှာ ဖြစ်တဲ့ မြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာ ယုံကြည်တဲ့ စိတ်ပေါ့။
ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ လောကီသရဏဂုံ ဖြစ်တယ်။
လောကီသရဏဂုံဖြစ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ ကိလေသာကိုတော့ ပယ်တာပဲ။ ဒါက ခေတ္တခဏ ပယ်တာ။
ကိလေသာပယ်ပုံ သုံးမျိုး ရှိတယ်။
၁။ တဒင်္ဂပဟာန် = တစ်ခဏ ပယ်တာကို တဒဂ်ပဟာန်လို့ ခေါ်တယ်။
အဲဒီ တဒင်္ဂပဟာန်နဲ့ ပယ်တာကျတော့ အစားထိုးလုပ်တဲ့ သဘော။ ကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါ အကုသိုလ် မဖြစ်ဘူးပေါ့။ တဒင်္ဂပယ်တာ။ အဲဒီ ကုသိုလ်ချုပ်သွားပြီးတဲ့နောက် အကုသိုလ် ပေါ်ချင် ပေါ်မှာပဲ။
၂။ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန် = ဒါကတော့ ခွာထားတယ်လို့ အဓိပ္ပာယ် ရှိတယ်။
တဒင်္ဂထက် ကြာကြာ ပယ်နိုင်တယ်။ အဲဒီ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်က ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုတော့ မှော်တောထဲ ကျွဲတိုးသွားသလိုပဲတဲ့။
ကျွဲတိုးသွားတဲ့အခါမှာ မှော်တွေ ကျဲသွားပြီးတော့ အဲဒီမှော်တွေက တော်တော်နဲ့ ပြန်မစေ့ဘူး။ နောက်တစ်ချိန်တော့ ပြန်စေ့သွားတာပေါ့။ အဲဒီလို ခပ်ကြာကြာလေး ပယ်ထားတာကို ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်နဲ့ ပယ်တယ်လို့ သုံးတယ်။
၃။ သမုစ္ဆေဒပဟာန် ဆိုတာကတော့ အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်လိုက်တယ်။
အကြွင်းမဲ့ ဖြတ်တယ်ဆိုတော့ နောက်ဘယ်တော့မှ မပေါ်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုရား ရဟန္တာတွေဆီမှာ အဲဒီ ကိလေသာတွေကို အကြွင်းမဲ့ ပယ်သတ်ထားတာမို့ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သန္တာန်မှာ လောဘ ဒေါသ မောဟ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဘယ်လောက် လိုချင်စရာ နှစ်သက်စရာ အာရုံတွေနဲ့ တွေ့တွေ့ မလိုချင်တော့ဘူး၊ မစွဲလမ်းတော့ဘူး။
အဲဒါ ကိလေသာကို အပြီး ပယ်သတ်ထားလို့ပဲ။
ပယ်တာ သုံးမျိုးအနက် လောကီသရဏဂုံက ကိလေသာကို တဒင်္ဂအားဖြင့် ပယ်တယ်။ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်လို့ ဆိုချင်လည်း ဆိုနိုင်တယ်။
တကယ်တော့ ဝိက္ခမ္ဘနပဟာန်ဆိုတာ ဈာန်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပယ်ခြင်းမျိုးပဲ။ ဈာန်ရထားတော့ ကိလေသာ ရုတ်တရက် ပြန်မဖြစ်ဘူး။ ခပ်ကြာကြာလေး ဟန့်တားနိုင်တဲ့ သဘော ရှိတယ်။
လောကီသရဏဂုံမှာ ဘုရား တရား သံဃာကို ယုံကြည်မှု ရတယ်။ အဲဒီ ယုံကြည်မှုကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ မှန်ကန်သော အမြင်၊ မှန်ကန်သော အယူ ကိုယ့်မှာ ရတယ်။ ဒါ လောကီသရဏဂုံပဲ။
အဲဒီ သရဏဂုံကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ နည်းအမျိုးမျိုး ရှိတယ်။
တို့ယူနေတာ ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ တစ်မျိုးပဲ သုံးကြတယ်။
တစ်ခါတလေ ဘယ်လို ဖြစ်နိုင်သလဲဆိုရင် ‘ဘုရားကို ကိုးကွယ်ပါတယ်’လို့ ကိုယ်က မပြောဘူး။ မပြောဘဲနဲ့ “ဒီကနေ့က စပြီး တပည့်တော်၏ ရုပ်နာမ်ခန္ဓာကို ဘုရားကို စွန့်လှူပါ၏။ တရားကို စွန့်လှူပါ၏။ သံဃာကို စွန့်လှူပါ၏”လို့ ဆိုရင်လည်းပဲ ဒါသရဏဂုံ ခံယူတာ တစ်မျိုးပေါ့။
နောက်တစ်ခုကတော့ “တပည့်တော် မြတ်စွာဘုရားသာလျှင် ကိုးကွယ်ရာ ရှိပါတယ်။ တရားသာလျှင် အားထားမှီခိုရာ လဲလျောင်းရာ ရှိပါတယ်။ သံဃာသာလျှင် အားထားမှီခိုရာ လဲလျောင်းရာ ရှိပါတယ်”လို့ ဆိုရင်လည်းပဲ ခုနက “ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ”နဲ့ အတူတူပဲ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်လည်း “မြတ်စွာဘုရားရဲ့ တပည့်ဖြစ်ပါတယ်။ တရားတော်ရဲ့ တပည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သံဃာတော်ရဲ့ တပည့်ဖြစ်ပါတယ်”လို့ ဒီလိုဆိုလိုက်ရင်လည်း သရဏဂုံယူပြီးသား ဖြစ်တယ်။
နောက်တစ်မျိုးက “တပည့်တော်သည် ဒီကနေ့က စပြီးတော့ ဘုရား, တရား, သံဃာမှတပါး အခြား မည်သူ့ကိုမျှ ရှိခိုးခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်း မလုပ်တော့ပါဘူး”လို့ အဲဒီလို ဆိုရင်လည်းပဲ ဒါ သရဏဂုံယူပြီးသား ဖြစ်တာပဲ။
အဲဒီတော့ သရဏဂုံယူရာမှာ အမျိုးမျိုး ရှိတယ်။
ခု ဘုန်းကြီးပြောခဲ့တာ ၄-မျိုး ရှိပြီ။
၁။ ပထမတစ်မျိုးက ကိုယ့်ကိုယ်ကို စွန့်တာ။
၂။ ဒုတိယတစ်မျိုးက မြတ်စွာဘုရားသာ လဲလျောင်းရာ ရှိတယ်လို့ ဆိုတာ။
၃။ တတိယကတော့ တပည့်ခံတာပေါ့။
၄။ စတုတ္ထကတော့ ရတနာသုံးပါးမှတပါး ရှိခိုးခြင်း၊ အရိုအသေပြုခြင်းတွေ မလုပ်ပါဘူး လျှောက်တာ။
အဲဒီ လေးမျိုး ရှိတယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်လည်း “တပည့်တော်သည် မြတ်စွာဘုရားကို အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ်ကို စွန့်လှူပါ၏”လို့ ဒီလို ပြောတာတွေလည်း ရှိတယ်။
အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာ ပြောချင်တာလေး တစ်ခု ရှိတယ်။ ‘ဒီကနေ့က စပြီးတော့ ဘုရား တရား သံဃာကို ကိုးကွယ်ပါတယ်’ ဆိုပြီးတော့ လိုက်ဆိုခိုင်းတာ ရှိတယ်။ တောင်ပုလုဆရာတော်ကြီးက အဲဒီလို ချ,ချပေးတယ် မဟုတ်လား။
‘အဇ္ဇ အာဒိံ ကတွာ ...’ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ ဘုန်းကြီးကတော့ အဲဒါ သိပ်ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ ဘဝင်မကျဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီ အဇ္ဇ အာဒိံ ကတွာ ... ဆိုတာက ‘ယနေ့ကို အစပြု၍’တဲ့။ ဒါက ဒီနေ့မှ ဘုရားနဲ့ တွေ့ပြီး ဘုရားကို ကြည်ညိုတဲ့လူအတွက်တော့ ဟုတ်တယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဒီနေ့မှ စပြီး ဖြစ်တဲ့သူက ဒါကို ဆိုရင်တော့ အဓိပ္ပာယ် ရှိတယ်။
မွေးလာကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့သူက ဒီကနေ့မှ ဒါကို ဆိုတော့ ဟိုးအရင်က မင်းတို့ ... ဘုရားကို မကိုးကွယ်ရာ ကျတယ်။ ဒါကြောင့် ‘အဇ္ဇ အာဒိံ ကတွာ’ဆိုတာကို ဘုန်းကြီးတော့ သိပ်ပြီး ဘဝင် မကျဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ကိုယ်သရဏဂုံ မြဲခဲ့တာက ဒီကနေ့မှ မြဲခဲ့တာ မဟုတ်ပဲကိုး။
ဒီကနေ့ အထပ်ထပ် ဆိုတာကတော့ မြဲရာ သံပါတ်ဆိုတာလိုပေါ့ ... ဟုတ်လား။ ပိုမိုပြီး ခိုင်မြဲအောင်လို့ ဆိုတာပါ။ နေ့တိုင်း ဆိုနေတာကိုး။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါတည်း ဆိုထားလည်းပဲ စိတ်ထဲ အမြဲရှိနေရင် သရဏဂုံတည်နေတာပဲ။ ဒါကြောင့် အဲဒီ ‘အဇ္ဇ အာဒိံ ကတွာ’ဆိုတာ ဘုန်းကြီးရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်ဘဝင် မကျချင်ဘူး။
စာထဲမှာ ပါတာတွေကျတော့ မြတ်စွာဘုရားနဲ့ တွေ့တယ်။ မြတ်စွာဘုရားက တရားဟောတဲ့အခါကျတော့ သဘောကျပြီး ‘တပည့်တော်ကို ယနေ့မှ စပြီး အသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင် ဘုရားကို ကိုးကွယ်တဲ့ ဥပါသကာအဖြစ် မှတ်တော်မူပါ ဘုရား’လို့ ဒီလို ရှိနေတာကိုး။
သူက အစက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်ဘူး။ ခုမှ ဘုရားနဲ့ တွေ့ပြီး ကြည်ညိုလို့ ခုမှ ဖြစ်တာ။ ဒါက သဘာဝကျတယ်။
တို့က မွေးလာကတည်းက ဗုဒ္ဗဘာသာဖြစ်လာတာ။ အဲဒါ ခုမှ ဘုရားကိုးကွယ်ပါ၏ဆိုတော့ စကားကပ်စရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။
ပြီးတော့ အခြားနည်းတွေလည်း ရှိသေးတယ်ပေါ့လေ။ ဒီ လေးနည်းပဲ မင်းတို့ မှတ်ထားကြ။ ဒီလေးနည်းက တစ်ခုခုနဲ့ ယူရင်လည်းပဲ သရဏဂုံယူပြီးသား ဖြစ်တာပဲ။ ဒါမှ မဟုတ်လို့ ဆိုနေကျအတိုင်း ‘ဗုဒ္ဓံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ’လို့ ဆိုရင်လည်း သရဏဂုံယူပြီး ဖြစ်တာပါပဲ။
သို့သော် ငါပြောသလို အဓိပ္ပာယ်လေး နားလည်အောင်တော့ လုပ်ပါ။
သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ … လို့ ဆိုရင်
ဘုရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ သိမှတ်ပါ၏။
တရားကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ သိမှတ်ပါ၏။
သံဃာကို ကိုးကွယ်ရာဟူ၍ ဆည်းကပ်ပါ၏။ သိမှတ်ပါ၏ … လို့ အဲဒါလေးတွေကို သိနေပါစေ။
အဲဒါဆိုရင် သရဏဂုံစစ်စစ် မင်းတို့ ရမယ်။
သရဏဂုံတည်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး မင်းတို့ကို ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ မှတ်ရမယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဘုရားလက်ထက်က မရှိခဲ့ဘူးပေါ့။
ဘုရားတပည့်ပဲ ရှိတယ်။ ဘုရား၏ ဥပါသက = ဥပါသကာ လို့ ခေါ်တယ်။
‘ဥပါသက’ဆိုတာ ‘ဘုရား တရား သံဃာကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်’ကို ‘ဥပါသက’လို့ ဆိုတယ်။
ရတနာသုံးပါး ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်။
သရဏဂုံ တည်နေသမျှ ကာလပတ်လုံး ဥပါသက = ဥပါသကာ လို့ ခေါ်တယ်။
အမျိုးသားကို ဥပါသကာ၊ အမျိုးသမီးကို ဥပါသိကာ လို့ ဒီလို ခွဲခေါ်တယ်။
သရဏဂုံ ယူထားလို့ ဥပါသကာ၊ ဥပါသိကာ ဖြစ်နေပြီ ဆိုပါစို့။ ဥပမာ - မင်းတို့မှာ ရှိတဲ့ ဆွေမျိုးထဲက အခြား ဘာသာဝင် ဘုန်းကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီဘုန်းကြီးကို မင်းတို့ ရှိခိုးမယ်။ သူက ငါ့ဆွေမျိုးပဲဆိုပြီး ရှိခိုးတယ်။ အဲဒါ သရဏဂုံ မပျက်ဘူး။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီ ဘုန်းကြီးကို ရှိခိုးတယ် အရိုအသေပေးတယ် ဆိုပါစို့။ သူ့ကို ကိုးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ ရှိခိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆွေမျိုးမို့ ရှိခိုးတာ သရဏဂုံ မပျက်ဘူး။
မင်းတို့ကို ပညာသင်ပေးဖူးတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို အရိုအသေ ပြုတယ်။ ရှိခိုးတယ်။ ဒါလဲ မပျက်ဘူး။
နောက် သူ့ကို အရိုအသေ မပေးရင် ငါ့ကို အန္တရာယ် ပြုချင် ပြုမှာ။ မဖြစ်ဘူး။ ရှိလေးတော့ ခိုးဦးမှ ဆိုပြီးတော့ ရှိခိုးတယ်။ ရှေးတုန်းက ဘုရင်တွေကို ရှိခိုးတာ အဲဒါပေါ့။ ဘယ်ရှိခိုးချင်မလဲ? လူလူချင်းပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့ကို ရှိမခိုးရင် ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ရှိခိုးရတာ။ အဲဒီလို ရှိခိုးရင်ကော ပျက်သလားဆိုတော့ မပျက်ဘူးနော်။
ဘယ်လို ရှိခိုးရင်တော့ ပျက်မလဲ?
ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်တဲ့အနေနဲ့ ရှိခိုးရင်တော့ သရဏဂုံပျက်သွားမယ်။ ဟိုတစ်ဖက်ကို လက်ခံလိုက်တဲ့သဘော ဖြစ်သွားမယ်။ အဲဒါလည်း မင်းတို့ မှတ်ထား။
ဒါကြောင့် တခြား ဘာသာခြားဆရာတွေ ဘာတွေကို အရိုအသေပေးတာ ကိစ္စမရှိဘူး။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့ အနေနဲ့ ရှိခိုးတယ်။ ကြောက်လို့ ရှိခိုးတယ်။ ဆွေမျိုးဖြစ်လို့ ရှိခိုးတယ်။ ဒီလိုသာ လုပ်တာကိုး။
သူတို့ကို ကိုးကွယ်ရာ၊ သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ ထွက်မြောက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဒီလို ယူဆပြီးတော့ ရှိခိုးတာ မဟုတ်ဘူး။
အဲဒါကြောင့်မို့လို့ သရဏဂုံ ယူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ လောကမှာ အမြတ်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်ပဲ။ သို့မဟုတ် ငါ့ကို ကောင်းရာ ကောင်းကြောင်း လောကုတ္တရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ညွှန်ပြတတ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ ဒီလို ယုံကြည်ပြီးတော့ ရှိခိုးတာမျိုးကို သရဏဂုံယူတယ်လို့ ခေါ်တယ်။
တစ်နေ့က ကိစ္စတစ်ခု ရှိတယ်။ ပြောတော့ ပြောရမှာပေါ့နော်။ သားက ခရစ်ယာန်ဖြစ်နေတယ်။ အဖေကြီးဆုံးတော့ တို့ကို ပင့်လို့ သွားတော့ … မီးရှို့ခါနီးပေါ့လေ။ သယ်သွားခါနီးကျတော့ … ကဲ မင်းတို့အားလုံး ကန်တော့ကြ ကန်တော့ကြလို့ ဆိုတော့ သားနဲ့ မြေးက မကန်တော့ဘူးပေါ့ကွာ။ ရှိမခိုးဘူးပေါ့။ ဒူးထောက်တော့ ထိုင်နေကြတာပေါ့။
ဘုန်းကြီးကလည်း ရိပ်မိပါတယ်။ သြော် … သူတို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်လို့ ရှိမခိုးတာဘဲလို့။ ဘုန်းကြီးက ပြောချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်ကလည်း ပြောစရာ မဟုတ်တော့ …။
‘ကိုယ့်အဖေဖြစ်လို့ ရှိခိုးတယ်။ မင်းတို့ ခရစ်ယာန်ဘာသာ သရဏဂုံ မပျက်ပါဘူး’လို့ ဘုန်းကြီးက ပြောချင်တယ်။ ပျက်မယ် မထင်ပါဘူး နော်။
ခရစ်ယာန်မှာ ပညတ်တော် ၁၀ ပါးထဲမှာ ပါတယ် မဟုတ်လား။ ငါမှတစ်ပါး တခြားဘုရားကို မကိုးကွယ်ရဘူးလို့ ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့်မို့ ခရစ်ယာန်တွေက ဘုရားမှတစ်ပါး ဘယ်သူ့ကိုမှ ရှိမခိုးရဘူး။ ဘုန်းကြီးလည်း ရှိမခိုးရဘူး။ မိဘလည်း ရှိမခိုးရဘူး။ အဲဒီလို ဘုန်းကြီး ထင်တယ်။
သူတို့ကို ကိုးကွယ်တဲ့အနေနဲ့ သူ့ဘာသာကို လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အနေနဲ့ ရှိခိုးရင်တော့ ဟုတ်တာပေါ့။
ကိုယ့်အဖေကြီးတစ်ယောက် သေသွားတယ်။ ကိုယ့်ကျေးဇူးရှင်အဖေဆိုတာ ခရစ်ယာန်ဖြစ်ဖြစ်၊ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ဖြစ်၊ သားနဲ့အမိ၊ မိဘနဲ့သားသမီး ဆိုတာကတော့ ကျေးဇူးများတာပဲ။ ဒီလောက် ကျေးဇူးများတဲ့ အဖေကို ဝတ်ချတာလေး မလုပ်နိုင်ဘူး။ မလုပ်ရဘူးဆိုရင် တော်တော်ကြီး ရိုင်းသွားတယ်။
ကိုယ် ခရစ်ယာန် ဖြစ်နေတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်အပေါ် အလွန်ကျေးဇူးကြီးတဲ့ အဖေရင်းကို အရိုအသေ မပေးလိုက်ရဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာကြီးလို့ အောက်မေ့တယ်။ ဒါ မှားတဲ့ အယူရှိတယ်လို့ ထင်တာပဲ။ ဒါဟာ မကောင်းတဲ့ အယူပဲလို့ ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒါကိုလည်းပဲ နားလည်ထားကြရမယ်။ တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက တခြားဘာသာဝင် ဘုန်းကြီးတွေ တွေ့ရင် ပြေလည်အောင် ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ ရှိခိုးစရာလည်း ရှိခိုးလိုက်တာပဲ။ ဘုရားနဲ့ … တပည့်တော်နဲ့ စသည်ဖြင့်လည်း အလိုက်အထိုက် ပြောလိုက်တာပဲ။
ခရစ်ယာန်တွေကျတော့ တစ်မျိုး။ ခင်ဗျားနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ လုပ်တော့တာပဲ။ တပည့်တော် ဘာညာ … ပြောရမှာ သိတယ်။ မပြောဘူး။ သူတို့က မြန်မာပြည်မှာတောင် ရှိတယ်။ ဒါကတော့ လူ့ယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုပဲ … ဟုတ်လား။ ဘုန်းကြီးတွေ့ရင် ဘုန်းကြီးကို အရှင်ဘုရားနဲ့၊ တပည့်တော်နဲ့ ပြောတယ် ဆိုပါတော့။ ဒါဟာ ဘာသာကို စွန့်တဲ့ သဘော မဟုတ်ဘူး။
လူမှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ရှိတယ် မဟုတ်လား။ ဒါကတော့ သူတို့ လွန်တယ် ထင်တာပဲ။ တစ်ခါတလေ ဘုရားနဲ့ တပည့်တော်နဲ့ မှားပြောသူတွေ၊ ကျွန်တော်နဲ့ ပြင်ပြောတဲ့သူတွေ တွေ့ဖူးတယ်။
တို့မြန်မာတွေကျတော့ ရိုမင်ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးတွေနဲ့ တွေ့ရင် ချောနေတာပဲ။ တပည့်တော်နဲ့ ဘာနဲ့ ပြောတာပဲ။ ကိစ္စမရှိဘူးလေ။
အဲ … သရဏဂုံအကြောင်း တော်တော်လေး သိသွားပြီ။
နောက် ဘာသိဖို့ လိုသေးသလဲဆိုတော့ သရဏဂုံ ဘယ်လိုပျက်သလဲ?
သရဏဂုံပျက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နှစ်မျိုး ရှိတယ်။
အပြစ်ရှိသော ပျက်ခြင်းနဲ့ အပြစ်မရှိသော ပျက်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အပြစ်ရှိသော ပျက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲဆိုရင် အခြားဘာသာထဲ ဝင်လိုက်ရင်၊ ဒါ အပြစ်ရှိသော ပျက်ခြင်း ဖြစ်သွားတာပေါ့။ တို့ဘက်ကနေ ကြည့်ရင်ပေါ့လေ။ မှန်ကန်တဲ့ အယူကနေ မှားတဲ့ အယူသို့ သွားတာပဲ။ ဒါကို အပြစ်ရှိသော ပျက်စီးခြင်းလို့ ဆိုတာပဲ။
အပြစ်မရှိသော သရဏဂုံပျက်ခြင်းမျိုး ဆိုတာကတော့ သေတာလို့ ပြောတာ။ လူဟာ သေရင် သရဏဂုံ ပျက်တယ်။ သေပြီး သရဏဂုံဟာ နောက်ဘဝ ပါမသွားဘူးလို့ ဆိုလိုတယ်။
ဒါကတော့ သူ့ဟာသူ သဘာဝအလျောက် သေသွားတာကိုး။ အဲဒီ ပျက်ခြင်းက လောကီသရဏဂုံပေါ့လေ။
လောကုတ္တရာသရဏဂုံကတော့ ဒီလို ပျက်တာ မရှိပါဘူး။ လောကုတ္တရာသရဏဂုံကတော့ နောက်ဘဝထိ ပါသွားတယ်။
သောတာပန်ဆိုပါတော့။ ဒီဘဝသေပြီး နောက်ဘဝ လူသွားဖြစ်တယ်။ ကလေးဖြစ်ဦးတော့ သူက တခြားဘာသာ မပြောင်းတော့ဘူး။ ဆိုပါတော့ သောတာပန်တစ်ယောက် ခရစ်ယာန်ဗိုက်ထဲ သွားဝင်စားတယ်။ မွေးတဲ့အခါ သူဟာ ခရစ်ယာန် မဖြစ်တော့ဘူး။
ပုထုဇဉ်ဆိုတာတွေကတော့ ဒီလို မမြဲဘူး။ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ချင် မဖြစ်ဘူး။
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ ဒီလို မဟုတ်တော့ဘူး။ မသိတောင်မှ အခြားဘာသာ ဘယ်တော့မှ မသွားတော့ဘူး။ တခြားဘုရားကို ဘယ်တော့မှ မကိုးကွယ်တော့ဘူး။
အဲဒါကြောင့် လောကုတ္တရာသရဏဂုံက ခိုင်မြဲတယ်။
Posted by LokaChantha at 3:06 PM No comments:
Posted by LokaChantha at 5:43 PM No comments: